(No. 25, May 12, 2020)
၁။ COVID-19 စစ်ဆေးစခန်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှုအပေါ် JMC-S သို့ KNU တိုင်ကြားစာပေးပို့
၂။ “ဝ”နှင့် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့တို့ကို ကာချုပ်တွေ့ဆုံ၊ မိမိတိုင်းပြည်ကို အားကိုးစိတ် မွေးရန်တိုက်တွန်း
၃။ ဖလုံ-စဝေါ်ပါတီမှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ရွေးချယ်မည်
၄။ အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်များ COVID-19 ကာကွယ်ရေး အချက် ၇ ချက်သဘောတူ
၅။ မူဆယ်မြို့အ၀င် တိုးဂိတ် ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ခံရ
၆။ သြဂုတ် ၃၁ ရက်အထိ အပစ်အခတ်ရပ်စဲကြောင်း တပ်မတော်ကြေညာ
၇။ KNU နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ပစ်ခတ်မှု နောက်ဆက်တွဲ ဝါသိုခိုရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
၈။ မြေပုံနဲ့ ပုဏ္ဏားကျွန်း ရွာနှစ်ရွာက လူငယ်တွေနဲ့ လူလတ်ပိုင်းတွေကို တပ်မတော်ဖမ်းဆီး
၉။ ဝါရာဇွပ်ဒေသခံများတောင်းဆိုသည့် စားကျက်မြေ မသတ်မှတ်ပေးနိုင်ကြောင်း အစိုးရအကြောင်းပြန်
၁၀။ ကုလားတန် စီမံကိန်း အချိန်မီ မပြီးတော့ဘဲ MOU သက်တမ်း တိုးမည်
၁၁။ ကျောက်တော်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် ကျောင်းဆရာ ၁ ဦးနှင့် ကလေးငယ် ၁ ဦး ဒဏ်ရာရ
၁၂။ တာချီလိတ်ခရိုင် တပတ်အတွင်း ကျပ်သိန်း ၄၀ဝ၀ ခန့်ရှိ မူးယစ်ဆေးများ သိမ်းဆည်းရမိ
၁၃။ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ခရီးသွားမည်ဆိုက ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးရုံးသို့ အကြောင်းကြားရန် အမိန့်ထုတ်ထား
၁၄။ တောင်ကုတ်တွင် မြို့ခံ ၃ ဦး အကြမ်းဖက် ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ခံရ
၁၅။ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမှချန်လှပ်မထားဘဲ တပ်မတော်အနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်စဲပေးသင့်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ် ပါတီ ဥက္ကဌတိုက်တွန်း
၁၆။ မြစ်ကြီးနားရှိ FQ များကို အစားအသောက်ထောက်ပံ့နေသည့် ပရဟိတအဖွဲ့များ ခေတ္တရပ်နားမည်ဟုဆို
၁၇။ အစိုးရနှင့် KNU နှစ်ဘက် စစ်ရေးတင်းမာမှုကိစ္စ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
၁၈။ တပ်မတော် အပစ်ရပ်ကြေညာချက်အပေါ် အကဲခတ်တွေ မေးခွန်းထုတ်
၁၉။ ဘူးသီးတောင်က စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ ရိက္ခာလိုအပ်နေ
၂၀။ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့အနီး ငလျင်လှုပ်
၂၁။ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးဝယ်ယူသူ ၃၇ ဦးကို KNU ဖမ်းဆီး၊ လူတစ်ဦး ၅ သိန်းနှင့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ၅ သိန်းစီ ဒဏ်ငွေချမှတ်
၂၂။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကြောင့် ဧပြီအတွင်း လူ ၇၁ ဦးသေဆုံးဟု အစီရင်ခံစာဖော်ပြ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲ အများဆုံး ဖြစ်ဟုဆို
၂၃။ ကယားပြည်နယ်သို့ လာရောက်သူများ ခရီးသွားထောက်ခံချက် ပြရမည်
၂၄။ ရေခမ်းခြောက်လာသည့် မော်လမြိုင် ရွှေနတ်တောင်ဆည်ရေပေးဝေမှု နှစ်ပတ်စာခန့်သာ အဆင်ပြေတော့မည်ဟုဆို
၂၅။ မူဆယ် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ဆေးရုံ ဆင်းခွင့် ရ
၂၆။ ကျပ်သိန်း ၂,ဝ၀ဝ ကျော် တန်ဖိုးရှိ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်လာသူလေးဦး ကို ဖမ်းဆီး
၂၇။ ကချင်ပြည်နယ်မှ COVID -19 လူနာ Case 144 မှာ စစ်ဆေးချက်အရ Negative နှစ်ကြိမ်ပြသဖြင့် ဆေးရုံဆင်းကာ သီးခြား Quarantine ဖြင့် နေထိုင်
၂၈။ မူဆယ်မြို့ရှိ ပြည်တော်ပြန် လက်ခံကြိုဆိုရေး စခန်းတွင် လူတစ်ထောင်ကျော် သောင်တင်နေ
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU တပ်မဟာ (၅)အနေဖြင့် မေလ ၆ ရက်နေ့က ၎င်းတို့၏ COVID-19 စစ် ဆေးရေးစခန်း (၂)ခုကို တပ်မတော်က ဝင်ရောက် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကရင်ပြည်နယ် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ(JMC-S)ကို ယနေ့ (မေ ၈ရက်) တိုင်ကြားစာ ပေး ပို့လိုက်သည်။
ကေအဲန်ယူအနေဖြင့် ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်နေစဉ် မြန်မာ့တပ်မတော် အမှတ်(၈) စစ်ဆင်ကွပ်ကဲရေး ဌာနချုပ်၏ လက်အောက်ခံ ခြေမြန်တပ် ရင်း (ခမ ရ-၄၀၅)၏ ယာယီ တပ်ရင်းမှူး လှိုင်ထွန်းဦးဆောင်သည့် အင်အား (၂၀)ခန့်က ကေအဲန်ယူ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ စိုက်ထူထားသည့် ကျန်းမာ ရေး အသိပညာပေးဆိုင်းဘုတ်များနှင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ် တဲများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများနှင့် ရန်ထောင်ခြိမ်းခြောက်မှု များပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။ ထိုသို့ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခံရမှုကြောင့် ကေအဲန်ယူ၏ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် (ခမရ-၄၀၅) တပ်ရင်းတို့အကြား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သလို (ခမရ-၄၁၀) တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့များနှင့်လည်း ၎င်းနေ့တွင်လည်း ထိပ်တိုက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းပစ်ခတ်မှု ၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကေအဲန်ယူ ဘက်က ဆို သည်။
KNU သည် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ်(NCA)ကို သဘောတူ လက်မှတ်ရေး ထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် (၁၀)အဖွဲ့အနက် တစ်ဖွဲ့အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အစိုးရ၊တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအကြား သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် NCA စာချုပ်အရ နှစ်ဖက်လေးစားလိုက်နာရမည့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ၏ အခန်း (၂)၊ အပိုဒ်(၇)၊ အပိုဒ်ခွဲ (က) အရ ပြည်သူ လူထု၏ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် လိုအပ်သောပံ့ပိုး ကူညီမှု များ ညှိနှိုင်းပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ပါရှိသည်။ http://kicnews.org/2020/05/covid19%e1%80%85%e1%80 %85%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%86%
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ NDAA (မိုင်းလား) အဖွဲ့နဲ့ UWSA (ဝ) အဖွဲ့တို့က တာဝန်ရှိတွေနဲ့ သီးခြားစီတွေ့ဆုံပြီး COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေ ပေးအပ်ခဲ့ တယ်လို့ တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မေလ ၁၀ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ ရွှေတြိဂံရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမ ဆောင်မှာ NDAA(မိုင်းလား)အဖွဲ့မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းလင်းခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ UWSA (ဝ) အဖွဲ့မှ ဦးညီကပ် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။
ဒီလိုတွေ့ဆုံရာမှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသူပေါင်း ၄ သန်းကျော်ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားသူ ပေါင်း ၁၇၈ ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ရောဂါဟာ မမြင်ရ၊ မကြားရ၊ အနံ့ခံ မရနိုင်တာ ကြောင့် လူတိုင်းကိုယ်စီအသိစိတ်နဲ့ သတိထားနေထိုင်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိုင်းလားဒေသမှာ အရပ်ဘက်ဆရာဝန် မလုံ လောက်ပါက တပ်မတော်ဆေးအဖွဲ့တွေ စေလွှတ်ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းတွေ သင်ကြားပေးဖို့ နယ်စပ်က ပြန်ဝင်လာပြီး Qurantine ထားရှိသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို မှတ်တမ်းထား ရှိဖို့၊ သွားလာမှုစည်းကမ်းတွေ စနစ်တကျလိုက်နာကြဖို့၊ ဆေးစစ်လိုပါက ကျိုင်းတုံမှာလာစစ်ဆေးဖို့နဲ့ မိမိတိုင်းပြည်ကို အားကိုးစိတ် မွေးရန်လိုတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
NDAA (မိုင်းလား) အဖွဲ့နဲ့ UWSA (ဝ) အဖွဲ့တို့ကလည်း သူတို့ဒေသမှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသူ မရှိသေးကြောင်းနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာပါက အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေ အသင့်ပြင်ဆင်ထားသလို နယ်စပ်ဝင်ပေါက်တွေမှာလည်း ဇန်နဝါရီလ ကတည်းက စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ NDAA (မိုင်းလား) အဖွဲ့နဲ့ UWSA (ဝ) အဖွဲ့တို့အတွက် တပ်မတော် က တစ်ဖွဲ့လျှင် PPE ဝတ်စုံ ၅၀ဝ စုံ၊ Surgical Masks ၁၀ဝ၀ဝ ခု၊ Goggles ၁၀ဝ ခု၊ Surgical Gloves ၁၀ဝ၀ ခု၊ Bleaching Powder ၂ ပုံး၊ Non-Contact Thermometer ၅၀ ခု၊ Hand Gel ၂၅၀ ဘူးနဲ့ N 95 Mask ၅၀ဝ ခုနဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ တပ်မတော် ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/387134
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် နှောင့်နှေးနေရသည့် ပါတီကိစ္စများအတွက် ကရင်ပြည်နယ် အခြေစိုက် ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (PSDP)က လာမည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ် လောင်း စိစစ်ရွေးချယ်မှုများကို မေလအတွင်း ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို စိစစ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် ယခု မေလအတွင်း ပါတီ အစည်းအဝေး တစ်ရပ်ခေါ်ယူ ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း PSDP ဥက္ကဋ္ဌ စောခင်မောင်မြင့်က ကေအိုင်စီ သို့ ယခုလိုပြောသည်။ “ဧပြီ လ ကတည်းက အစည်းအဝေးထိုင်ဖို့ လျာထားပေမယ့် Covid-19 ကြောင့် မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ဒီ မေလအတွင်း မှာတော့ လုပ်ဖို့ လျာထားတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလက သိပ်မလိုတော့ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် (ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်) တောင်းတဲ့ခါ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ပေါ့” ဟု ၎င်းက ယနေ့(မေ ၈ ရက်)တွင် ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ချင်သော သူများမှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၊ ပညာအရည်အချင်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ နေရပ် လိပ်စာများကို အဆိုပြု လျှောက်လွှာဖောင်၌ ဖြည့်သွင်းပြီးနောက် ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီဝင်များက အစည်း အဝေးထိုင်ကာ အဖက်ဖက်မှ ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း PSDP တာဝန်ရှိသူထံမှ သိရသည်။ ကရင်ပြည်နယ်တွင်သာ အဓိကထား ယှဉ်ပြိုင် သွားရန်ရှိသည့် PSDP အနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ရွေးချယ်သွားရန် ရှိနေသလို မဲဆန္ဒနယ်မြေ မထပ်ရေးအတွက် အခြားသော ညီနောင်ကရင်ပါတီများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း စောခင်မောင်မြင့် က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(PSDP) နှင့် ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက် တစ်ပါတီ (KNDP)၊ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ(KPP) နှင့် ကရင်အမျိုးသား ပါတီ(KNP)တို့ တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီများအဖြစ် ရပ်တည်လျက် ရှိသည်။ http://kicnews.org/2020/05/%e1%80%96%e1%80%9c%e1%80%b6%e1%80%af
အစိုးရ၏ Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေး ကော်တီသည် တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ရေးထိုးထားသော အပစ်ရပ် ၁၀ ဖွဲ့နှင့် မေလ ၈ ရက်နေ့က ဆွေးနွေးကြသည်။ အဆိုပါ COVID-19 ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို အွန်လိုင်းရုပ်သံ (Online Video Conferencing) ပုံစံဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ် ၂၀ ကျော်က ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အချက် ၇ ချက် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရ၏ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ EAO များနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေး ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အငြိမ်းစား ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ဇော်ဦး က “ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ ကျနော်တို့ကော်မတီတွေအားလုံး တက်ပါတယ်။ သူတို့ဘက် ကလည်း EAO ခေါင်းဆောင်တွေတက်ကြပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲက ကောင်းပါတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။ အစည်း အဝေးတွင် ရောဂါကာကွယ်ရေးထိန်းချုပ်ရေးအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ၊ ပစ္စည်းပံ့ပိုးရေးကိစ္စများ အစရှိသည်တို့ ကို အစိုးရနဲ့ EAO များအကြား အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြရန်အပါအဝင် ရောဂါကုသနိုင်ရေးအတွက် အစိုးရနှင့် EAO များအကြား သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ခြင်းနှင့် အနီးစပ်ဆုံး ဆေးရုံများသို့ ပို့ဆောင်ကုသရေးကို အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ KNU အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပဒိုစောတာဒိုမှူးကလည်း အစိုးရ၏ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီနှင့် အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးထားသည့် EAO များဆွေးနွေးပွဲသည် COVID-19 ကာကွယ်ရေးကို အစိုးရနှင့် EAO များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မည်ကဲ့သို့အခြေခံမူများဖြင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြမည်ကို ဆွေးနွေးကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“COVID-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်းရေး ကော်မတီ” ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က (EAO)များ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဒေသတွင်း နေထိုင်သူများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးရန် ရည်ရွယ်ကာ ဧပြီ ၂၇ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းကော်မတီတွင် အစိုးရနှင့် EAO များကြား သတင်း အချက်အလက် ဖလှယ်ရန်၊ EAO များနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရကြား ပူးပေါင်းရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ EAO ဒေသအတွင်း ရောဂါလက္ခဏာ ပြလာသူများရှိပါက စောင့်ကြပ်ကုသမှု ပေးနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြရန် အပါအဝင် ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းရေးဆောင်ရွက်ရန် စသည့်လုပ်ငန်းတာဝန် ၇ ရပ် ရှိသည်။ https://burma. irrawaddy.com/news/2020/05/09/222267.html
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ မူဆယ်မြို့အဝင် Oriental Highway (OHC) တိုးဂိတ်ကို တနင်္လာနေ့ ည(၈)နာရီခွဲ အချိန် လောက်မှာ အမည်မသိ ဆိုင်ကယ်စီးသူ နှစ်ဦးက ဗုံးလို့ ယူဆရတဲ့ အရာနဲ့ လာရောက်ပစ်ခတ် သွားတာကြောင့် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ အစိုးရ ပြန်ကြားရေး သတင်းမှာ ဖေါ်ပြပါတယ်။
ဒီ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် (OHC) တိုးဂိတ်ငွေကောက်ကောင်တာ တာဝန်ကျ ကိုမျိုးထက်နိုင် ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရသွားပြီး၊ တိုးဂိတ် ကောင်တာ (၃)ခု အမိုးလန် မှန်ကွဲ သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(OHC) တိုးဂိတ်ကို ဗုံးနဲ့လာပစ်သူနှစ်ဦးက တော့ မူဆယ် မြို့ရှောင်လမ်းအတိုင်း ဆိုင်ကယ်နဲ့ မောင်းပြေး တိမ်းရှောင်သွားပြီး ခုချိန်ထိ စုံစမ်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/muse-oriental-highway-bomb-attack-/5415462
မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှ သြဂုတ် ၃၁ ရက်အထိ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲထားကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်ရုံးက မေလ ၉ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်၊ ကာကွယ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်း တွေ ပိုမိုထိရောက် လျင်မြန်ကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တပ်မတော်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအတိုင်း နိုင်ငံတော်က အကြမ်းဖက်ဟု သတ်မှတ်ကြေညာထားတဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေတဲ့ နေရာများမှအပ ကျန်နယ်မြေတွေမှာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁၀ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲထားကြောင်း
ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့် ကမ္ဘာတဝန်း လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေ ရပ်တန့်ပေးကြဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က တိုက်တွန်းထားသလို မြန်မာ နိုင်ငံမှာလည်း ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ထိန်းချုပ်၊ ကာကွယ်၊ ကုသရေးအတွက် နိုင်ငံတော်က ဆောင်ရွက်နေတာကို တပ်မတော်ကလည်း ပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
အခုလို အပစ်ရပ် ကြေညာထားတဲ့ကာလမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအနေနဲ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒ ၆ ချက်အနက် ၄ ချက်ကို အလေးအနက် လိုက်နာကြဖို့လည်း တပ်မတော်က တိုက်တွန်းပါတယ်။ အဆိုပါ ၄ ချက်ကတော့ သဘောတူစာချုပ်များအတိုင်း ကတိတည်ရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီ ချက်များအပေါ် အမြတ်မထုတ်ရန်၊ ဒေသခံပြည်သူများအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရန်၊ နိုင်ငံတော်က ထုတ်ပြန်ထားသည့် တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရန်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်း တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်တာနဲ့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် အနိုင်ကျင့်တာတွေမလုပ်ဖို့၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရားအဆင့်ဆင့်ကို လည်းကောင်း၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့စေရေးကို လည်းကောင်း၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေကို လည်းကောင်း မထိခိုက်အောင် တာဝန်ယူဖို့နဲ့ မလိုက်နာရင် တပ်မတော် အနေနဲ့ လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်း သတိပေးထားပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၃ ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကိုးကန့် (MNDAA) ၊ တအောင်း (TNLA)နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA)တို့ကလည်း တဖက်သတ် အပစ်ရပ်ကြောင်း မကြာခဏ ကြေညာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီလို ပစ်ခိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ်စဲ ကြောင်း ကြေညာထားတဲ့ကြားကပဲ တိုက်ပွဲတွေကတော့ ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ http://bur mese.dvb.no/archives /387002
KNU -ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး မူတြော်(ဖာပွန်)ခရိုင် (တပ်မဟာ-၅) လက်အောက်ခံ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်-KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့အကြား မေလ ၆ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ဖာပွန်မြို့နယ် ဝါကော်ကျေး ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ဝါသိုခိုကျေးရွာမှ ရွာသားများမှာ ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် နေရကြောင်း သိရသည်။
ဖာပွန်- ကမမောင်းကြားရှိ ၀ါသိုခိုကျေးရွာနှင့် ဖားလို့လမ်းခွရှိ KNU မူတြော်ခရိုင်၏ COVID-19 ရောဂါကာကွယ် တားဆီးရေး ဂိတ်(၂)ခုကို မြန်မာ့တပ်မတော်က မေလ ၆ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းကြောင့် နှစ်ဖက်အကြား တင်းမာမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ယင်းနေ့ နေ့လည်တွင် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့်အတွက် ၀ါသိုခိုရွာသား ၄၈၀ ကျော်မှာ ထိုသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်းခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၀ါကော်ကျေး ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး စောလှဌေးဦးက “ စဖြစ်တာနဲ့ ရွာလုံး ကျွတ်ထွက်ပြေးကြရတာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရင်တစ်ခါတုန်းက ဖြစ်တာ ရွာသား ၂ ယောက်ထိ ဘူး တယ်လေ။ အခုရွာမှာ ရွာကိုထိန်းတဲ့သဘောအနေနဲ့ လူကြီးသုံးလေးယောက် လောက်ပဲကျန် တယ်။ အိမ်ခြေ ကတော့ ၇၀ ကျော်၊ လူဦးရေကတော့ ၄၈၀ ကျော်ရှိတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဖာပွန်မြို့နယ် ၀ါကော်ကျေး ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတွင် ၀ါကော်ကျေး၊ ကျွန်းတော၊ တံတားဦး၊ ၀ါးဒူး ၊ ၀ါသိုခိုနှင့် မိဇိုင်းချောင်း ဖျား(မယ်ကျိခီး) စသည့်ကျေးရွာများပါဝင်ပြီး ယခုဖြစ်စဉ်တွင် ပစ်ခတ်မှုနှင့် ကိုက်အ နည်းငယ်သာ ကွာဝေးသည့် ဝါသိုခို ကျေးရွာမှ ရွာသားများသာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရသည်ဟု သိရသည်။
ထို့အပြင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်များကြောင့် လက်ရှိ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် KNU တပ်မဟာ ၅ တို့ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင်သင့်နေရာယူမှုများရှိနေသေးသည့်အတွက် ပစ်ခတ်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွား လာမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်းလည်း ဒေသခံ များပြောပြချက်များအရသိရသည်။ http://kicnews.org/2020/05/knu%e1 %82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1 %80%b9%e1%80%b7
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံနဲ့ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တွင်း ရွာနှစ်ရွာက လူငယ်နဲ့ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် အမျိုးသားတွေကို တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေ ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေသခံတွေဟာ ရွာမှာမနေရဲဘဲ နီးစပ်ရာရွာတွေကို ထွက်ပြေးနေ ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မေလ ၉ ရက် ဒီမနက် ၄ နာရီလောက်မှာ မြေပုံမြို့နယ် ရေရှင်ရွာကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်း ဝင်ရောက်လာပြီး မနက် ၆ နာရီ လောက်မှာ ကျေးရွာသား ၇၀ လောက်ကို ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ အသက် ၁၂ နှစ်အထက် လူငယ်တွေကို ဖမ်းဆီးပြီး ရေရှင်တောင်ပေါ်ကို တပ်ရိက္ခာသယ်ခိုင်းတာလို့ လုံခြုံရေးအရ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရှေရှင်ကျေးရွာက ဒေသခံတစ်ဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကြောင့် တချို့လည်း ရွာမှာမနေရဲဘဲ နီးစပ်ရာရွာတွေကို ထွက်ပြေး နေကြပြီး၊ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေပဲ အများစုကျန်ခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ကျေးရွာအဝင်မှာ လက်နက်ကြီး နှစ်ခု ရွာအလယ်မှာ လက်နက်ကြီး တစ်ခုနဲ့ ရေရှင်တောင်ပေါ်မှာ လက်နက်ကြီး တစ်ခု စုစုပေါင်း လက်နက်ကြီး လေးခု တပ်စွဲထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အလားတူ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ဒိုးတန်းရွာဟောင်းက ဒေသခံ ခုနှစ်ဦးကိုလည်း ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲ တပ်မတော်က ဖမ်းဆီး သွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ အသက် ၅၀ ဝန်းကျင်းအရွယ်တွေကို ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ သိရကြောင်း ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်လတ်က ပြောပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းဦးစီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦး ကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမယ့် မရခဲ့ပါဘူး။ တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်း ကတော့ ဒီသတင်းကို မသိရသေးကြောင်း တုံ့ပြန်ခဲ့ ပါတယ် RFA က ရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့ကနေ ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့ တစ်လကျော်ကာလအတွင်း သေဆုံးတဲ့ အရပ်သား ၈၅ ဦးထက် မနည်းရှိ နေပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူဟာလည်း ၂၀ဝ ကျော်အထိ ရှိနေပါတယ်။ https://www.rfa. org/burmese/news/army-arr ested-myaypon-ponnagyun-young-adults-villagers-05092020072757.html
၉။ ဝါရာဇွပ်ဒေသခံများတောင်းဆိုသည့် စားကျက်မြေ မသတ်မှတ်ပေးနိုင်ကြောင်း အစိုးရအကြောင်းပြန်
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဟူကောင်ချိုမ့်ဝှမ်းဒေသ လီဒိုလမ်းမပေါ် ဝါရာဇွပ်ကျေးရွာဒေသခံများ တောင်းဆိုထားသည့် စာကျက်မြေကို တောင်းဆိုမှုအတိုင်း မသတ်မှတ်ပေးနိုင်ကြောင်း ဒေသခံများကို ကားမိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ မေလ ၇ ရက်နေ့ အကြောင်းပြန် ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ကျေးရွာဒေသခံများကိုယ်တိုင် ကျေးရွာစာကျက်မြေအဖြစ် မြေဧက ၃၅၅၀ ကို သတ်မှတ်ပြီး တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုပေးရန် နေပြည်တော် ဗဟိုအစိုးရထံသို့ ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင် တောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက် ယခု ပထမအကြိမ် အကြောင်း ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
မေလ ၇ ရက်နေ့ ၎င်းတို့ကို ကားမိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝါရာဇွပ်ဒေသခံ ဦးလရှီးအောင်လတ်က “ကျနော်တို့ကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ခေါ်ယူတ်ယ။ ခင်ဗျားတို့ တင်ပြထားတဲ့ စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အထက်က အကြောင်း ပြန်ထားတယ်။ အဲ့တော့ အဲ့ဒါကို ဖတ်ပြတယ်။ ပထမက စားကျက်မြေ သတ်မှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ မြေဧက အရမ်း ကျယ်တယ်။ အစိုးရက နွား ၇ နှစ်ကောင်မှာ မြေဧက ၁ ဧကသ သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ ပြီးရင် အခုတောင်းဆိုထားတဲ့ နေရာတွေက ကျားထိန်းသိမ်းရေးနေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလည်း ပါဝင်နေတယ်။ နောက် ယုဇန အခွန်ဆောင် ထားတဲ့ မြေနေရာလည်း ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ကြောင့် သီးခြား မြေလွတ်တဲ့နေရာ ပြန်ရှာပြီး ထပ်မံပြန်တင်ပြရန် လိုတယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တယ်”ဟု ပြောသည်။ ဟူးကောင်းချိုမ့်ဝှမ်းဒေသတွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ကျားထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်း စတင်ခဲ့ပြီး နောက် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် တဖန်အဆိုပါ စီမံကိန်းအတွင်း နယ်မြေတချို့ကို ယုဇနကုမ္ပဏီထံ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သဖြင့် ဒေသခံများ၏ လယ်ယာမြေနှင့် စားကျက်မြေများ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရသည်ဟု ပြောသည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် ကျေးရွာစားကျက်မြေသတ်မှတ်ပေးရန် ဒေသခံများကိုယ်တိုင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအထိ စာရေးပေးပို့ခဲ့ပြီးနောက် ယခု ပထမအကြိမ် အကြောင်းပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထပ်မံပြောသည်။
ဟူးကောင်းချိုမ့်ဝှမ်းဒေသ ကျေးရွာ ၂၀ ကျော်တွင် လွန်ခဲ့သည် ၁၀ နှစ်ကျော်က မြေယာသိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ သည့် မြေယာများကို ပြန်လည်ရရှိရန် ပြန်လည်ကြိုးစားရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်ကာ စားကျက်မြေ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြေဧက ၆ သောင်းကျော်ကို စားကျက်မြေသတ်မှတ်ပေးရန် နေပြည်တော်ဗဟိုအစိုးရအဆင့်အထိ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်စားကျက် မြေသတ်မှတ်ထားသော ကျေးရွာ ၁၃ ခုပြီးပြီး ၎င်းတို့မှာ တရုန်၊ လဂျားဘွမ့်၊ ပနပ့်၊ အောင်ရာ၊ တိန့်ကောက်၊ ဝါရာဇွပ်၊ ရှဒူးဇွပ်၊ နောင်းမီ၊ ဒွန်ဘန်၊ လဝါး၊ ဒွမ်ဘုန်းနှင့် လဂေါင် စသောကျေးရွာများဖြစ်ကြသည်။ ထိုနေရာများတွင် ဒေသခံများနှင့် ယုဇန ကုမ္ပဏီတို့ကြားမှာလည်း ပဋိပက္ခဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/05/09/%e1%80%9 d%e1%80%ab%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%
တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA)တို့၏ တိုက်ပွဲများကြောင့် မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံ စာချုပ်ချုပ်ဆိုကာဆောင်ရွက်နေသည့် ကုလားတန် စီမံကိန်း၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အပြီးသတ် မဆောက်နိုင်ဘဲ ရပ်တန့်နေသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယ၂ နိုင်ငံကြား ချုပ်ဆိုထားသည့် သဘောတူ စာချုပ်အရ ကုလားတန် စီမံကိန်းကို ၃ နှစ်အတွင်းအပြီး တည် ဆောက်ကြမည်ဟု ကတိကဝတ်ပြုထားပြီး စီမံကိန်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန် ၁ ရက်က စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စာချုပ်ပါ ကတိ ကဝတ်အရ ၂၀၂၀ ဇွန်လတွင် အပြီးသတ် တည်ဆောက်ပြီးစီးရမည် ဖြစ်သော်လည်း တပ်မတော်နှင့် AA တို့၏ တိုက်ပွဲများ ကြောင့် ကြန့်ကြာနေခြင်းဖြစ်သည်။ ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က “ကုလားတန် စီမံကိန်းလမ်းပိုင်း က ဇွန်မှာ မပြီးနိုင်ဘူး။ စာချုပ် သက်တမ်းကလည်း ဇွန်မှာ ကုန်မှာဖြစ်လို့ အခု ပြည်ထောင်စုအဆင့်က စာချုပ် MOU သက်တမ်းတိုးဖို့ ပြန်လုပ်နေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကုလားတန် စီမံကိန်းသည် အိန္ဒိယ၏ အရှေ့မျှော် မူဝါဒအရ ကုန်းတွင်းပိတ်ဖြစ်နေသည့် အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက် ပြည်နယ်ကို ပင်လယ်ထွက်ပေါက် ရရန်၊ ဒေသတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများကို အရှေ့တောင် အာရှဒေသသို့ ဖြန့်ကျက် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အခြားပြည်နယ်များနှင့် အရှေ့မြောက် ပြည်နယ်သည် ဒေသတွင်း အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရန်အတွက် ကြားတွင် နိုင်ငံရေးအရ မပြေလည်သည့် ပါကစ္စတန်နှင့် ဘင်္ဂလာားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့ကြားမှ ဖြတ်သန်းသွားရမည့် ကျဉ်းမြောင်းသည့် လမ်းသွယ်တခုသာ ရှိသည်။ ယခုအခါ စီမံကိန်းတွင်း ပါဝင်သည့် စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း၊ ပလက်ဝ ဆိပ်ကမ်း၊ ပလက်ဝ မြစ်ကူးတံတားတို့မှာ ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်မှ ပလက်ဝမြို့သို့ ဖောက်မည့် ကား လမ်းမှာ တိုက်ပွဲများကြောင့် မပြီးမစီး ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ အိုက်ဇောမှ ပလက်ဝမြို့အထိ ဖောက်မည့် ကားလမ်းတွင် အိန္ဒိယဘက်မှ ၎င်းတို့ နိုင်ငံတွင်းလမ်းကို ဖောက်နေပြီဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်း၊ ပလက်ဝမြို့နယ် အတွင်းမှာ တိုက်ပွဲများကြောင့် နယ်မြေ မအေးချမ်းသဖြင့် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ လမ်းဖောက်လုပ် နိုင်သေးသည်ဟု ဦးစိုးထက်က ပြောသည်။
AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်က ကုလားတန်စီမံကိန်း တည်ဆောက်နေသည့် ဒေသတကြောမှာ ၎င်း၏ တပ်ဖွဲ့များ လှုပ်ရှားသည့် နေရာဖြစ်သဖြင့် AA ၏ သြဇာအာဏာ သက်ရောက်မှုကို အိန္ဒိယက အသိအမှတ်ပြုရမည် ဟု ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်းက ပြောဆိုထားသည်။ အိန္ဒိယက AA ကို အသိအမှတ်ပြုရန်လိုပြီး ညှိနှိုင်းမှသာ စီမံကိန်းအောင်မြင်မည်ဟု ပြောသည့် အပြင် စီမံကိန်းစတင်လည်ပတ်ပါက လမ်းကြောင်းတလျှောက် ဖြတ်သန်းကာ ကုန်သွယ်ကြမည့် အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီများနှင့် ပြည်တွင်းမှ စီးပွားရေးသမားများက AA ကို ငွေကြေး အခွန်ပေးဆောင်ရမည်ဟုလည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်းက ဧရာဝတီကို ပြောဆိုထားသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/09/222271.html
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ် တောင်ဘွယ်ကျေးရွာအတွင်း မေလ ၈ ရက်နေ့ ညနေ က လက်နက်ကြီး ကျရောက် ပေါက်ကွဲသဖြင့် မူလတန်းပြ ဆရာ ၁ ဦးနှင့် မိန်းကလေးငယ် ၁ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ ဒဏ်ရာရရှိသူများမှာ မူလတန်းပြဆရာ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ဦးစိုးသိန်းနှင့် အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် ၆ တန်း ကျောင်းသူ မသော်တာဖြိုး တို့ ဖြစ်ကြောင်း ကာယကံရှင် မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူ ဦးစိုးသိန်း၏ ဖခင် ဦးစံသိန်း က “လက်နက်ကြီးက လူတွေ အိပ်နေကြတဲ့ အချိန်လာကျတာပါ။ ပထမ ကျနော်အိမ်အနား ဝန်းကျင်ကို ၁ လုံးလာကျတယ်။ အဲဒီ အချိန် ကျနော်သားက ကြောက်ပြီး အိမ်ပေါ်ကနေ အိမ်အောက်ကို ဆင်းပြီးတော့ သွားပုန်းဖို့ သွားတဲ့အခါ နောက်ထပ် တလုံး လာကျပြီးတော့ ထိမှန်တာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
တောင်ဘွယ်ကျေးရွာနေ ဦးအောင်သန်းဝင်း က “ကျနော်တို့ ရွာ အရှေ့ဘက်ကမ်း မျောက်တောင် ကျေးရွာအနီး ဘုရား တောင်ကုန်းပေါ်မှာ တပ်စွဲထားတာရှိတယ်။ အရင်နေ့တွေကလည်း အဲဒီနေရာက နေ့တိုင်း ပစ်နေတာ ရှိတယ်။ သူတို့(တပ်) က ဘယ်ဖက်ကို လှည့်ပြီးတော့ ပစ်တယ်ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့လည်း မသိဘူး။ မနေ့က ကျနော်ရွာထဲကို လက်နက်ကြီး လာကျတယ်။ ရွာထဲမှာရော ၊ မြစ်ကမ်းဘေးရော လက် နက်ကြီး ၄ လုံးလောက် လာကျတာ ရှိတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြော သည်။ ထိုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်း က “အဓိက ပြောချင်တာကတော့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပြီဆိုရင် တပ်မတော်က လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို AA နဲ့ AA အမာခံတွေက အစဉ်တစိုက် လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားမဖြစ်ပွား မသိသေးဘူး။ သူတို့ ရဲ့စွပ်စွဲချက်ကတော့ အမြဲတမ်း လက်နက်ကြီးကျတယ် ဆိုတာလုပ်တယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
မိုင်းပေါက်ကွဲမှု အပါအဝင် လက်နက်ကြီး ၊ လက်နက်ငယ်များ ထိမှန်၍ အရပ်သားပြည် သူများမှာလည်း နေ့စဉ်နှင့်မျှ သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာ ရရှိနေမှုနှင့် အတူ အရပ်သားများ ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ နေအိမ်များ မီးရှို့ခံရမှုများလည်းများပြား လာနေသည့်အတွက် အရပ်သား အစိုးရလက်ထက်တွင် အပြင်းထန်ဆုံးနှင့် ထိခိုက်မှုအများဆုံး တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်သည်။ https://burma.irraw addy.com/category/news
သျှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်ခရိုင်တွင် တပတ်အတွင်း ကျပ်သိန်း ၄၀ဝ၀ ခန့်ရှိသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးကို သိမ်းဆည်းရမိ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ တာချီလိတ်မြို့နယ်တွင် အများဆုံးဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျန်ရှိမူးယစ်ဆေးများမှာ မိုင်းယောင်းမြို့ နှင့် မိုင်းဖြတ်မြို့တို့တွင် ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်သည်။
မေလ ၇ ရက် နေ့လည် ၁နာရီ က တာချီလိတ်မြို့နယ် မိုင်းဆတ်-တာချီလိတ်ကားလမ်းပေါ်တွင် အသက် ၂၁ နှစ် အရွယ် လီဗု မောင်းနှင်ပြီး၊ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် လော်ညီး လိုက်ပါးစီးနင်းလာသည့် ကားပေါ်တွင်စစ်ဆေးရာ ကျပ်သိန်း ၃ ထောင် တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွဆေးပြားများကို သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း မူးယစ် ရဲတပ်ဖွဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် အရသိရသည်။ ဖမ်းဆီးရမိသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူ ယာဉ်မောင်း လီဗု နှင့် လိုက်ပါစီးနင်းသည့် လော်ညီးတို့ကို တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်းက မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူပြီး ကွင်းဆက်များဖော်ထုတ်စစ်ဆေးလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် မေလ ၅ ရက်က မိုင်းယောင်းမြို့၊ မိုင်းယောင်း-မိုင်းဖြတ် သွားလမ်းတွင် လမ်းလျှောက်လာသူအသက် ၁၉ နှစ် အရွယ် မနာဘို အား မသင်္ကာသဖြင့် စစ်ဆေးရာ ၎င်းကိုင်ဆောင်လာသည့်အိတ်အတွင်း ကျပ်သိန်း ၄၅၀ တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွဆေးများကို သိမ်းဆည်းရမိကြောင်းရဲထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကွင်းဆက်ကို စစ်ဆေးရာ မိုင်းယောင်းမြို့နယ် ရပ်ကွက် (၁) နေ အိုက်ပေး ထံ ယူလာသည်ကို သိရသဖြင့် အိုက်ပေး အိမ်ကို ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ အိမ်ရှေ့တွင် ရပ်ထားသည့် ကားပေါ်တွင် ကျပ်သိန်း ၂၇၀ တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးကို ဆက်လက် သိမ်းဆည်းရမိသည်။ ထိုနည်းတူ မေ ၄ ရက် တွင်လည်း သျှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မိုင်းဖြတ်-ကျိုင်းတုံ သွားကားလမ်းပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်နေသည့် အမျိုးသား ၂ ဦးကို မသင်္ကာသဖြင့် စစ်ဆေးရာ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲတွင် ဘိန်းစိမ်း အလေးချိန် ၂၇ ကီလို (ဒေသ ကာလပေါက်ဈေး တန်ဖိုးငွေကျပ် ၂၇၀) ကိုသိမ်းဆည်းရကြောင်း သိရပါသည်။ https://burmese. shannews.org/archives/16461
ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော် (DKBA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ခရီးသွားမည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးရုံးများသို့ သတင်းပို့ပြီး သွားလာရန် မေ ၁၁ ရက်နေ့တွင် DKBA ဗဟို ဌာနချုပ် (ဆုံဆည်း မြိုင်)က အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အဆိုပါ အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်သည် အခြားအကြောင်းအရာများ မပါဝင်ဘဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပြန်လည် ကြပ်မတ် လိုသည့် သဘောသာ ဖြစ်သည်ဟု DKBA မှ ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သန်းဌေးက ကေအိုင်စီသို့ ယခုလို ပြောသည်။ ၎င်းက “ ဒီလိုစည်းကမ်း က အရင်ကတည်းကထုတ်ထားပြီးသား။ တချို့က စည်းကမ်းလိုက်နာတာရှိတယ်၊ မလိုက်နာတာရှိတယ်။ အမျိုးမျိုးပေါ့။ ဒါက စည်းကမ်းပြန်တင်းကြပ်ပြီး စနစ်တကျဖြစ်အောင် ပြန်ထိန်း ညှိတဲ့သဘောပါ”ဟု ပြောသည်။ အဆိုပါ အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် DKBA စစ်ဗျူဟာများ၊ ဌာနများ၊ တပ်ရင်းများ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စစ်ကြောင်းများ အားလုံးပါဝင်ပြီး ခွင့်နှင့်ဖြစ်စေ တာဝန်အရဖြစ်စေ၊ အရေးပေါ်ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စေ မည်သူမဆို ခရီးသွားမည်ဆိုပါက သတင်းပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်သည် ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြုကရင့်တပ်မတော် (DKBA ) ကလိုထူးဘောတပ်ဖွဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမိုရှေးက လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီး အမိန့်စာကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါက တပ်ဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်း ချက်အတိုင်း ထိရောက်စွာ အပြစ်ပေး ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်ဟု အမိန့်စာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့် တပ်မတော်အဖွဲ့သည် KNU -ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ခွဲထွက်ခဲ့ပြီးနောက် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် -DKBA အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ ရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင် တပ်မတော်(DKBA)အဖြစ် နာမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူ စာချုပ် -NCA လက်မှတ်ထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/05/dkba%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b% e1%80%96%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%82%94%e1
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့ပေါ်တွင် နေထိုင်သူ နိုင်ငံရေးပါတီဝင် ၁ ဦးနှင့် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ မြို့ခံ ၃ ဦး ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀ (က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခံနေရကြောင်း သတင်း ရရှိ သည်။ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်ခံထားရသူများမှာ တောင်ကုတ်မြို့နယ် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) မှ မြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးဝေသောင်း၊ မြို့နယ်စည်ပင်ယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇေယျကျော်နှင့် စည်ပင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ (ဟောင်း) ဦးစန်းငွေတို့ ဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခံ ဦးဇေယျကျော်၏ ဇနီး ဒေါ်ဟန်စုလှိုင် က “ဒီနေ့ တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်ပြီး ကျမ အမျိုးသားနဲ့ အဖမ်းခံထားရတဲ့ လူတွေ ကို ရမန်ယူပါတယ်။ အကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်ခံထားရတယ်လို့တော့ ကျမအမျိုးသားက ပြောသွားတယ်။ ဘာကြောင့် ဖမ်းတယ်ဆိုတာလည်း ကျမတို့လည်း တိတိကျကျ မသိဘူး။ အခုလို ဖြစ်တဲ့အပေါ် အရမ်းလည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေရတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ အဆိုပါ ဖမ်းဆီးခံ တောင်ကုတ်မြို့ခံ ၃ ဦးကို မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေ ယနေ့ တောင်ကုတ်မြို့နယ် တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်ပြီး မေလ ၂၃ ရက်နေ့အထိ ရမန်ကြီး ၂ ပတ်ယူခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
တောင်ကုတ်မြို့နယ် ANP ပါတီမှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေကြွယ် က “ကျနော်တို့ ပါတီက ဦးဝေသောင်း အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အကြမ်းဖက်မှု ဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်ပြီးတော့ ဒီနေ့ချုပ်ရမန်ယူသွားတာရှိတယ်။ အခုအချိန် အခြေအနေက တအားရှုပ်ထွေးနေတော့ ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာ ကျနော်တို့လည်း ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့် ဖမ်း တယ်ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့အနေနဲ့ သေချာ မသိရသေးဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ရဲမှူး သိန်းနိုင် က “ကျနော်တို့က ရမန်ယူပြီးတော့ စုံစမ်း စစ်ဆေးနေတဲ့ ကာလမို့ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုတော့ ပြောလို့ မရဘူး။ သတင်းတချို့ရရှိထားတဲ့အတွက် အဲဒီအပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ ကျနော်တို့က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလောက်ပဲ လောလောဆယ် ပြောလို့ ရမယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် အဆိုပါ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရသူများတွင် ဦးဇေယျကျော်မှာ မေလ ၉ ရက်နေ့က လည်းကောင်း၊ မေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဦးစန်းငွေ အားလည်းကောင်း၊ ယနေ့ မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဦးဝေသောင်းအား လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းစရာများရှိသည်ဟုဆိုကာ ရဲတပ်ဖွဲ့က နေအိမ်သို့ လာရောက်ခေါ်ယူသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိသားစု ဝင်များက ပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် တောင်ကုတ်မြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီများအကြားတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ် နေသည့်အတွက် မြို့လုံခြုံရေးကို တင်းကြပ်ထားကြောင်းလည်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ https://burma.irrawaddy.c om/news/2020/05/11/222380.html
တပ်မတော်၏ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကောင်းမွန်သော ဆောင်ရွက် ချက်ဟု မိမိတို့ရှုမြင်သလို တပ်မတော်အနေဖြင့် သဘောထားကြီးစွာထား၍ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြေငြာပေး သင့်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဌ နိုင်ဟံသာ တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်၊ ကာကွယ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက် လျင်မြန်ကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအတိုင်း နိုင်ငံတော်မှအကြမ်းဖက်ဟု သတ်မှတ်ကြေညာထားသော အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ အစည်းများရှိသည့် နေရာများမှအပ ကျန်နယ်မြေများ၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ(၁၀) ရက်မှ သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲထားကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက ကြေညာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ဟံသာက “ဒီကပ်ရောဂါက အန္တရယ်တော်တော်ကြီးမားပါတယ်၊ အားလုံးအတူတကွဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ကြမှ ဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့် တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေရင်တော့ ရောဂါကာကွယ်ရေးအပိုင်းတွေမှာ အခက်အခဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်၊ နေရာတိုင်းအား လုံးမှာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကို ရပ်စဲထားသင့်တယ်၊ အချို့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရပ်စဲပြီး အချို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ်နေတာကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ၊ ဒါကြောင့် တပ်မတော်အနေနဲ့ သဘောထားကြီးကြီးထားပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ်ရပ်စဲပေးပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်”ဟု မွန်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။ မြန်မာ့မဟာဗျိူဟာနှင့် မူဝါဒလေ့လာ ရေးအင်စတီကျူ ISP-Myanmar ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်သူငြိမ်းက “ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ထိခိုက်လာတဲ့အနေအထားမှာ ဒီလို အရင်း အမြစ်တွေ ရှားပါးလာတဲ့အနေအထားမှာလည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ဒီလို အခွန်ငွေကောက်တာ ကစ လို့ အရင်းမြစ်တွေ ရှားပါးလာနိုင်တဲ့ပြဿနာမျိုးရှိတယ်၊ အဲလိုအရင်းမြစ်တွေရှားပါးလာရင် လူသားတွေမှာ လုယက် တတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်ခင်ဗျ၊ အချင်းချင်းလည်း ပြဿနာပဋိပက္ခ ပိုကြီးလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလည်း ရှိတတ်တယ်၊
သို့ရာတွင် ယင်းကဲ့သို့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး ကြေညာထားသည့်ကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းများအားလုံးအနေဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒ(၆) ရပ်အနက်မှ ဖော်ပြပါ(၄)ချက်ဖြစ် သည့် (က) သဘောတူစာချုပ်များအတိုင်းကတိတည်ရန်။ (ခ ) ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်များအပေါ် အမြတ်မထုတ်ရန်။ (ဂ ) ဒေသခံပြည်သူများအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရန်။ (ဃ) နိုင်ငံတော်က ထုတ်ပြန်ထားသည့် တည်ဆဲဥပဒေများကို အလေးအနက်ထား လိုက်နာရန်လိုအပ်ကြောင်း တပ်မတော်၏ကြေငြာချက်တွင် ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရားအဆင့်ဆင့်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့စေရေး၊ ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန် တာဝန်ယူ ရမည်ဖြစ်ပြီး အထက်ပါ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါက တပ်မတော် အနေဖြင့် လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။ http://burmese.monnews.or g/2020/05/11/%e1%80%99%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80
မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ Covid-19 ရောဂါကြောင့် FQ ဝင်နေသူများကို ပရဟိတအဖွဲ့မှ အစားအသောက်ထောက်ပံ့နေမှုကို မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှစကာ ခေတ္တရပ်နားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း Covid-19 ကူညီပေးရေး မြစ်ကြီးနားအခြေပြု ပရဟိတအဖွဲ့မှ စာရင်းစစ် အထက်တန်းရှေ့နေ ဦးခွန်မြတ်မင်းအောင် က ပြောသည်။
“ကျနော်တို့အဖွဲ့က အဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်တွေ ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ငွေနဲ့ ကြားခံကူညီနေတဲ့အဖွဲ့ ဖြစ်တယ်။ အဲတော့ ကျနော်တိုပမှာရှိတဲ့ငွေနဲ့ တောက်လျှောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် တစ်လ လောက်ဘဲ သူတို့ကို ပံ့ပိုးနိုင်မယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ကနေပြီး အစိုးရကို အကူအညီတောင်းကြည့်တယ်။ အစိုးရကနေပြီးမှ သူတို့အနေနဲ့ ၅ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့ ကနေစပြီး တစ်လလုံးသူတို့အနေနဲ့ တာဝန်ယူမယ်လို့ အဲနေ့ကပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ ၁၁ ရက်နေ့မှ ဘဲ စကျွေးမယ်လို့ထပ်ပြောတယ်။ နောက်ဆုံးကြားတဲ့သတင်းအရဆိုရင် မကျွေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းပြန်ရတယ်။ အဲ့ကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ ၁၀ ရက်နောက်ပိုင်း အားလုံးရပ်ထားမယ်ဆိုပြီး အားလုံးဆန္ဒအတိုင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်”ဟု ဦးခွန်မြတ်မင်းအောင် ကဆိုသည်။
လကုန်တဲ့ထိကျွေးနိုင်မယ့် အလှူရှင်ရှိပါတယ်။ Q ထားတဲ့သူတွေကို လ ကုန်တဲ့ထိက ကျနော်တို့အစိုးရအဖွဲ့က ကျွေးစရာပိုက် ဆံ ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ သို့သော်နောက်ပိုင်းဝင်လာလို့ နောက်ပိုင်းထားရမယ့်သူတွေအတွက် အလှူရှင်မရှိရင်တော့ ကျနော် တို့ ကျွေးမှာဖြစ်တယ်။ မကျွေးတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွေးရဲ့သားနဲ့ အလှူရှင် သူတို့တာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်။ ကုသိုလ်ယူမယ်ဆိုရင် တော့ ကျနော်တို့က မငြင်းနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ နောက်ထပ်အလှူရှင် ၃ ဦး ပေါ်လာတယ် သူတို့ကျွေးမှာဖြစ်တယ်။ လကုန် နောက်ပိုင်း အလှူရှင်မရှိရင်တော့ အစိုးရအဖွဲ့ အနေနဲ့ ကျွေးမှာဖြစ်တယ်။ ဟု ကချင်ပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်က ပြောသည်။
လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်တွင် အစိုးရကသတ်မှတ်ထားသည့် FQ Center များသည် ပညာရေး ကောလိပ်၊ သားဖွားသင်တန်းကျောင်း၊ သူနာပြုကျောင်း၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် စုစုပေါင်း ၄ နေရာ သတ်မှတ်ထားပြီး Q ဝင်နေသူ စုစု ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှ သိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/05/0 8/%e1%80% 99%e1%80%bc%e1%80%85%e1%80%ba%e1
အစိုးရ၏ Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ညှနှိုင်းပူးပေါင်းရေးကော်တီနှင့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU တို့ သည် မေလ ၁၁ ရက်တွင် ကရင်ပြည်နယ်ဖာပွန်ခရိုင်နှင့် သထုံခရိုင်ရှိ စစ်ရေးတင်းမာ မှုကိစ္စများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဆွေးနွေးပွဲကို ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း က အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ဘက်မှ ဦးဆောင်ပြီး KNU ဘက်မှ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပဒိုစောတာဒိုမှူးက ဦးဆောင်ကာ အွန်လိုင်းရုပ်သံ (Online Video Conferencing) ပုံစံဖြင့် ဆွေးနွေးကြခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၆ ရက်က ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်ခရိုင် ၊ ဒွဲလုံမြို့နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် KNU တပ်မဟာ (၅) တို့ အကြား အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဧပြီလ ၃၀ ရက်ကလည်း မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံခရိုင်ရှိ KNU တပ်မဟာ (၁) စစ်ဆေးရေး ဂိတ်ကို ဖယ်ရှားပေးရန် တပ်မတော်ဘက်က လာရောက်တားမြစ်ရာမှ စစ်ရေးတင်းမာမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပဒိုစောတာဒိုမှူးက “အထူးသဖြင့် နားလည်မှုလွဲမှားနိုင်လောက်တဲ့ နေရာတွေမှာရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့ စခန်းတွေကို နှစ်ဖက်ကြားမှာ ကြိုတင်အသိပေးပြီး ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ညှိနှိုင်းမလဲဆိုတဲ့ မူတခုချမှတ်ပြီး ကော်မတီနဲ့ ညှိနှိုင်းသွားဖို့ပါ။ ကျနော်တို့ဘက်က ကိုဗစ် စစ်ဆေးရေး စခန်းတွေရဲ့စာရင်းကိုပေးမယ်။ အဲဒီပေါ်မှာညှိနှိုင်းသွားဖို့ပါ” ဟု ပြောဆိုသည်။
အစိုးရ၏ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ EAO များနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ အငြိမ်းစား ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ဇော်ဦး ကလည်း KNU နှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီတို့၏ ဆွေးနွေးပွဲသည် အပြုသဘောဆောင် ပြီး တိုးတက်မှုရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။ KNU အနေနှင့် COVID-19 ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များ ဆောင်ရွက် မည်ဆိုပါက မည်သည့်နေရာများတွင် မည်သည့်ပုံစံဖြင့် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်မည်ကို ကော်မတီထံ တင်ပြပြီး ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ရန် KNU ဘက်သို့ တောင်းဆိုထားကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
တိုင်းရင်းသားအရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးကမူ KNU အနေနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ဖွင့်မည့် စစ်ဆေး ရေးဂိတ်များ စာရင်းကို အစိုးရ၏ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီ ထံတင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက လတ်တလောတွင် နှစ်ဖက် ပဋိပက္ခများ နည်းသွားနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်သည်။ သို့သော် တဖက်က စဉ်းစားကြည့်ပါက စစ်ဆေးရေးဂိတ်များဖွင့်ရန် အစိုးရ၏ ကော်မတီနှင့် ညှိနှိုင်းရမည်ဆိုသည့် အချက်သည် အစိုးရက ခွင့်ပြုမှသာ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များကို KNU ဘက်က ဖွင့်ခွင့်ရှိသည့် သဘောဖြစ်နေကြောင်း ၎င်းက ထောက်ပြသည်။ ဦးမောင်မောင်စိုးက “အစိုးရသဘောတူလို့ဖွင့်ရင် ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မှတ်ချက်ပေးသည်။
KNU အဖွဲ့သည် အစိုးရနှင့် တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လ တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အစိုးရနှင့် လက်တွဲကာ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့ အစည်းလည်းဖြစ်သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/11/222385.html
မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် ကမ္ဘာတ၀န်း ကပ်ရောဂါနဲ့ ကြုံနေရချိန်မှာ ရောဂါထိန်းချုပ် ကာကွယ်ကုသရေး အထောက်အကူ ဖြစ်စေဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဒီကနေ့ မေလ ၁၀ ရက်နေ့ကစပြီး သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ်စဲမယ့် အကြောင်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက မနေ့တုန်းကပဲ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေရှိရာ နယ်မြေတွေမှာ သက်ရောက်မှုရှိမှာ မဟုတ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း အစိုးရက အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ AA ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ လတ်တလော တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွေက နယ်မြေတွေ ပါဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေတဲ့ နယ်မြေတွေ မပါဝင်ဘဲ တဖက်သတ် အပစ်ရပ် ကြေညာတာဟာ လက်တွေ့ အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်းတို့လို အကဲခတ်တွေက မေးခွန်း ထုတ်နေကြပါတယ်။
“COVID-19 ဖြစ်နေချိန်မှာရော ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး လမ်းကြောင်းမှာရော ဒီလို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြေညာတာကို ကောင်းမွန်တဲ့ ခြေလှမ်းတခုလို့ မြင်ပါတယ်ဗျ။ သို့သော်လည်းပဲ ဒီ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဟာ တနိုင်ငံလုံးကို လွှမ်းခြုံတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မြင်တယ်။ အဲ့တော့ လက်ရှိအခြေအနေမှာ တကယ်တော့ တိုက်ပွဲတွေ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ အများဆုံး ဖြစ်နေတာက ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်မှာ ဖြစ်တဲ့အခါကျ တော့ အဲ့ဒီ့ တိုင်းရင်းဒေသ ၂ ခုကိုပါ လွှမ်းခြုံတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မြင်တယ်။ ရခိုင်အမျိုးသား ကောင်စီ (ANC) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးထွန်းဇော်ကတော့ တပ်မတော်ရဲ့ တဖက်သတ် ကြေညာချက် ဟာ နိုင်ငံတကာ ဖိအားတွေကို ရှောင်လွှဲဖို့ ကြိုးပမ်းတဲ့လုပ်ရပ် အဖြစ်နဲ့သာ ရှုမြင်ပါတယ်။
“အဲ့သလိုပဲ ပစ်နေခတ်နေ တိုက်နေကြတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေကြတဲ့ ကာလဒေသတွေမှာလည်း အပစ်အခတ် ရပ်စဲမှုကို ထိထိ ရောက်ရောက် ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးတယ်။ အထူးသဖြင့်က အခု စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေ တင်းမာနေတဲ့ ချင်းနဲ့ ရခိုင် ပြည်နယ်တွင်းက ဒေသခံ ပြည်သူလူထုကြားမှာ အင်မတန်မှ ကြီးမားတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေ ဆိုးကြီးကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဆိုတာ နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ နှစ်ဖက်ကြား သဘောတူညီချက်တွေရဖို့ ယုံကြည်မှု နားလည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဒီအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြေညာချက်ကို လက်တွေ့ဖြစ်အောင် ဒီအတွက်စပြီး ခြေလှမ်းပြင်ဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်နေပြီလို့ သုံးသပ်ပါတယ်။” https://burmese.voanews.com/a/react-myanmar-military-ceasefire/54 13596.html
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့၊ ရပ်ကွက် ၄ မှာ မြေငှားရမ်းပြီး အထောက်အပံ့ အကူအညီမရဘဲ တဲဆောက်နေရတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ပြည်သူတွေနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း အပါအဝင် နီးစပ်ရာကျေးရွာတွေမှာ ခိုလှုံနေရသူတွေ စားရေးသောက်ရေးနဲ့ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲတွေကြုံနေရပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ရပ်ကွက် ၄ မှာ အထောက်အပံ့ အကူအညီမရတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း အပါ အဝင် နီးစပ်ရာကျေးရွာတွေမှာခိုလှုံနေရသူတွေ စားဝတ်နေရေး အခဲတွေကြုံနေရကြောင်း ခမီချောင်းကျေးရွာ ဒေသခံ ဦးကျော် သာခိုင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သောင်းရွှေက ရပ်ကွက် ၄ က စစ်ဘေးဒုက္ခ သည်တွေတင် အခက်အခဲဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘဲ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် တွေအားလုံး အခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။“လက်ရှိ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ထဲက စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်း ၂၀ လောက်မှာရှိတဲ့ လူဦးရေ တစ်သောင်းကျော်ဟာ အစိုးရရဲ့ အကူအညီအထောက်အပံ့ ပုံမှန်မရတဲ့အတွက် ပုဂ္ဂိလက အကူ အညီတွေပဲ မျှော်လင့်နေရတယ်လို့ ဦးအောင်သောင်းရွှေက ဆိုပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရွှေလှအောင်ကတော့ ရပ်ကွက် ၄ တင်မကဘဲ တစ်မြို့နယ်လုံးမှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် တွေအတွက် နေ့စဉ်စားဖို့ ဆန်အကူအညီပေးထားတယ်လို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။ REC ရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ အထောက်အပံ့ အကူအညီမရဘဲ ငှားရမ်းနေထိုင် နေရတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃၇၀ဝ ခန့်ရှိပြီး အစုအဝေးလိုက် စခန်းဖွင့်နေကြတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အကူအညီတွေ မရသလောက်ပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်းက စစ်ဘေးဒုက္ခသည် စခန်း ၂၀ လောက်နဲ့ နီးစပ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ ကျေးရွာတွေမှာ ရောက်ရှိခိုလှုံနေရတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် အရေအတွက်ဟာ ၁၃၀ဝ၀ ကျော်ရှိပြီလို့ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရွှေလှအောင်က ပြောပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/w ar-refugees-in-buthidaung-05102020055932.html
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့အနီးမှာ အင်အားရစ်ခ်ျတာစကေး ၃ ဒသမ ၈ အဆင့်ရှိ အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့ မြေငလျင် တခု လှုပ်ခတ်သွားတယ်လို့ မိုးဇလဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မေလ ၉ ရက် ည ၈ နာရီ၊ ၅၇ မိနစ်၊ ၅၇ စက္ကန့် အချိန်က မြစ်ကြီးနားမြေငလျင်စခန်းရဲ့ မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက် ၇၄ မိုင် လောက်‌ဝေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့ရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက် ၅ မိုင်ခန့်အကွာ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၆ ဒသမ ၅၈ ဒီဂရီ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၇ ဒသမ ၆၃ ဒီဂရီ၊ အနက် ၄၇ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပြုပြီး မြေငလျင်တခု လှုပ်သွားတာလို့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/387010
၂၁။ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးဝယ်ယူသူ ၃၇ ဦးကို KNU ဖမ်းဆီး၊ လူတစ်ဦး ၅ သိန်းနှင့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ၅ သိန်း စီဒဏ် ငွေချမှတ်
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ရဲတံခွန်ကျေးရွာနှင့် စခန်းကြီးကျေးရွာအကြား အတွင်းစခန်းကြီးကျေးရွာရှိ ခြံတစ်ခြံ၌ မေလ ၇ ရက်နေ့ ညပိုင်းက မူးယစ်ဆေးဝါးလာရောက်ဝယ်ယူသူ ၃၇ ဦးကို ကရင့်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ KNPF က ဖမ်းဆီးပြီး လူတစ်ဦးငွေကျပ် ၅ သိန်းနှင့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ၅ သိန်း ဒဏ်ငွေချမှတ်ထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အဆိုပါ မူးယစ်သုံးစွဲသူတစ်ဦးကို ၆ လစာဖြင့်ညီမျှသည့် ငွေဒဏ် ၅၀ဝ,ဝ၀ဝ ကျပ်နှင့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအတွက် ၆ လစာ ဖြင့် ညီမျှသည့်ငွေဒဏ် ၅၀ဝ,ဝ၀ဝ ကျပ် ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒုရဲတပ်ဖွဲ့မှူး စောငြိမ်းချမ်း အမှတ်(၄)ရဲဌာန KNPF, ဝင်းရေးမြို့နယ် ဆိုသူက အမိန့်ချမှတ်ထားသည့် မိတ္တူစာတစ်စောင် မွန်သတင်းအေဂျင်စီက လက်ခံရရှိထားသည်။“ဖားပြ ရွာမှာ သွားရွေးရတာပါ၊ ရွာစုံက မွန်လူငယ်တွေချည်းပဲ အဖမ်းခံထိတာ၊ လွတ်တဲ့လူက လွတ်လာပြီ၊ လာမရွေးသေးတဲ့လူတွေ ကျန်သေးတယ်” ဟု ဒဏ်ငွေသွားရောက်ပေးဆောင်ခဲ့သူ အမည်မဖော်လိုသည့် ဝယ်ကလိရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယင်းသို့ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရာ၌ နောက်နောင်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း ကိစ္စရပ်များမပြုလုပ် မကျူးလွန်တော့ပါ၊ ထပ်မံ ကျူးလွန်မိပါက ထိုက်သင့်သည့်ပြစ်ဒဏ်ကို ပြတ်သားစွာအရေးယူခံပါမည်ဟု မိမိကို မိမိတာဝန်ရှိလူကြီးမင်း၏ ရှေ့မှောက်တွင် ဝန်ခံကတိပြု လက်မှတ်ရေးထိုးစေသည်ဟု သိရသည်။ “ ကျနော်တို့ ရွာသား ၁၀ ယောက်လောက်ပါတယ်လို့ သိရတယ်၊ နာမည်တော့ မသိရပါဘူး၊ သူတို့မိဘဆွေမျိုးတွေ တိတ်တိတ်လေးမသိမသာ သွားရွေးနေကြတယ်”ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် ပငကျေးရွာသားတစ်ဦးက ပြောဆိုသော်လည်း မွန်သတင်းအေဂျင်စီအနေဖြင့် သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပေ။
အဆိုပါ မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးထားသူများအား အပြစ်ရှိသူများအား တရားဥပဒေအရရေးယူရေးနှင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအား ပြန်လည်လွှတ်ပေးရေး ကရင်ပြည်နယ် လုံ/နယ်ဝန်ကြီးမှတစ်ဆင့် JMC-S နှင့် KNU ဆက်ဆံရေးရုံး များသို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း လူမှုကွန်ယက် Facebook စာမျက်နှာများတွင် တွေ့ရှိရသည်။ အထက်ပါဖြစ်စဉ်ကို အမည်မဖော်လိုသည့် ရှေ့နေတစ်ဦးက “ပြည်သူက အစိုးရ ၂ ခုနဲ့ ကြုံဆုံနေရပုံပါ၊ ၂ ဖက်အရေးယူတာခံနေရတယ်”ဟု သုံးသပ်သည်။ http://burmese.monnews.org/ 2020/05/10/%e1%80%9e%e1%80%b6%e1%80%96c%e1%80
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ များနှင့်ဆက်စပ်၍ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီအတွင်း လူ ၇၁ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ၉၁ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း Burma Monitor က ဖော်ပြ သည်။ ထို့အပြင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဆက်စပ်ဖြစ်စဉ် အကြိမ် ၃၀ ဖြစ် ပွားခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးခံရသူ ၉၆ ဦးရှိပြီး ၃၃ ဦး ပြန်လွတ် မြောက်ခဲ့ကြောင်း Burma Monitor ၏ ဧပြီအစီရင် ခံစာက ဆိုသည်။
ထိခိုက်သေဆုံးမူများကို ဖော်ပြရာတွင် လက်နက်ကြီး ကျည်ကျရောက်မှု အပါအဝင် တိုက်ပွဲ၊ မိုင်းပေါက်ကွဲမှုနှင့် လူ့အခွင့် အရေးဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ဖြစ်စဉ်များကို ထည့်သွင်းတွက်ချက် ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များကြား ဧပြီ ၁ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးရှိ မြို့နယ် ၁၇ ခုတွင် တိုက်ပွဲ ၃၄ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဟု Burna Monitor အစီရင်ခံစာကဆိုသည်။ ထို့အပြင် မိုင်းပေါက်ကွဲမှု ၁၀ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု အများဆုံး မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပြီး စုစု ပေါင်း ၁၉ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းတိုက်ပွဲများနှင့် ဆက်စပ်၍ သေဆုံးသူ ၃၀ ဦးရှိပြီး ၆၆ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့အပြင် မြေမြှုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှု လေးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နှစ်ဦး သေဆုံးကာ တစ်ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်။ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝဒေသတွင်လည်း ဧပြီအတွင်း တိုက်ပွဲရှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက်မှုကြောင့် အရပ်သား ၁၆ ဦး သေဆုံးကာ ၁၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် မြေမြှုပ်မိုင်း ပေါက်ကွဲမှု တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲလေးကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီး ငါးဦးသေဆုံးခဲ့ကာ မိုင်းပေါက်ကွဲမှု တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကရင်ပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲတစ်ကြိမ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ သည်ဟုလည်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားသည်။ https://7day.news/detail?id=185811
ကယားပြည်နယ်အတွင်း အဝင်၊ အထွက်ပြုလုပ်မည့် သူများသည် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်မှ ခရီးသွားထောက်ခံချက် ပြသရ မည်ဟု ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ယမန်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
COVID-19 ရောဂါ ကူး စက်ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရေးကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် ကယားပြည်နယ်၏ မြို့နယ် အဝင်၊ အထွက် ဂိတ်များတွင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း၊ ခရီးသွားထောက်ခံချက်များ စစ်ဆေးခြင်းများကို ပြုလုပ်နေပြီး ပြည်နယ်တွင်းသို့ လာရောက်သူများဖြစ်စေ၊ ပြည်နယ်တွင်းမှ ပြင်ပသို့သွားရောက်သူများဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးများမှ တစ်ပတ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသည့် ခရီးသွား ထောက်ခံချက်များကို ယူဆောင် လာရမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရခြင်းသည် ရောဂါပိုးရှိသူများနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သူများအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆက်စပ်ဖော်ထုတ် နိုင်ရေး အတွက်ဖြစ်ပြီး ထောက်ခံချက်မပါရှိပါက ထောက်ခံချက် ပြန်ယူခိုင်းခြင်း၊ အရေးယူခြင်း၊ ပြည်နယ်အတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့် ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း ကယား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် သဘာဝ သယံဇာတနှင့် သစ်တောဝန်ကြီး ဦးတီရယ်က ပြောသည်။ ‘‘ထောက်ခံချက်ပါရင် စစ်ဆေးရတာ လွယ်မယ်၊ မြန်မယ်လေ။ ဘာလို့ဆို တချို့က အမှန်မဖြေပဲ စစ်ဆေးသူတွေကို ရစ်တာ၊ ရန်တွေ့တာမျိုးရှိတယ်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က လိမ်ပြီးသွားတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ပါ။ ထောက်ခံချက် မပါရင် ပေးမဝင်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး ’’ ဟု ၎င်းကပြောသည်။ https://7day.news/detail?id=185757
ရာသီဥတု အလွန်ပူပြင်းသောကြောင့် မော်လမြိုင်မြို့ကို အဓိကရေဝေပေးနေရသည့် ရွှေနတ်တောင်ဆည် ရေခမ်းခြောက်မှုရှိ လာပြီး နှစ်ပတ်စာခန့်သာ အဆင်ပြေတော့မည်ဟု မော်လမြိုင်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ တွဲဖက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်ကိုကိုက ပြောသည်။ “ပူပြင်းတော့ ရွှေနတ်တော်ဆည်ရေကို တစ်ရက်ကို ဂါလံသိန်း ၄၀ လောက် ထုတ်နေတယ်၊ အတ္တရံက တစ်ရက် ကို ဂါလံ ၁၅ သိန်းလောက် ထုတ်နေရတယ်၊ ပြသနာဖြစ်နေတာက ရွှေနတ်တောင်ကနေ ထုတ်တဲ့ ရေက ကျွန်တော်တို့ ခန့်မှန်းတာဆိုလိုရှိရင် နောက်ထပ် ၂ ပတ်စာလောက်ကိုပဲ ရေယူလို့ အဆင်ပြေတော့မယ့် အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့အတူ မွန်ပြည်နယ်ရေရှားမှုအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ရန်ပုံငွေ ၁ ဘီလီလျံမှ အသုံးပြု၍ ဖြေရှင်း ပေးနေသည်ဟု မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအေးဇံက ပြီးခဲ့သည့်မတ်လလယ်တွင် သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်နယ်တွင်းရေရှားပါးမှု ၇၅ %ကို ပြည်နယ်အစိုးရဖြေရှင်းပေးနိုင်ထားပြီးဟု ဆိုသော်လည်း မြို့နယ်တိုင်းတွင် ကျေးရွာများပါမကျန် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ လူမှုရေးအသင်းများနှင့် ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့များက နေ့စဉ်ရေအလှူဝေပေးနေရကြောင်း လူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့် တွေ့ရှိရသည်။
အထူးသဖြင့် ချောင်းဆုံနှင့် ပေါင်မြို့နယ်ဘက်မှာ အဓိက ရေရှားပါးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု မော်လမြိုင် လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့မှ ကိုဇင်မိုးက ပြောသည်။ အကယ်၍ သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ပြီး ရေအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လာပါက ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး ရေးဦးဌာနသို့ အကူအညီတောင်းခံနိုင်သလို သောက်သုံးရေများ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရေး စီစဉ်ထားကြောင်း ပြည်နယ် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/05/08/%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%81%e1%80%99%e1%80
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ သည် ဓာတ်ခွဲခန်း အဖြေနှစ်ကြိမ် Negative ဖြစ်သဖြင့် ဆေးရုံ ပေးဆင်း လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဧပြီ ၂၄ ရက်တွင် မူဆယ်မြို့ အသက် ၈၇ နှစ်ရှိ အမျိုးသမီး တဦးသည် ကိုဗစ် ၁၉ အတည်ပြုလူနာအဖြစ် ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက် ထုတ်ခဲ့သည့် သူဖြစ်သည်။ ထိုဧပြီ ၂၄ ရက် နောက်ပိုင်း အသက် ၈၇ နှစ်အရွယ် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာကို ထပ်မံစစ်ဆေးရာ Negative ၂ ကြိမ်ဖြစ်သဖြင့် ဆေးရုံ မှ ဆင်းခွင့် ပေးလိုက်ကြောင်း မူဆယ်မြို့ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာ ဟန်နိုင်စိုး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ပြောသည်။
ဆေးရုံ ပေးဆင်းပြီးနောက် ဟိုတယ် Quarantine ၇ ရက် နှင့် နေအိမ် Quarantine ၇ ရက် စုစုပေါင်း ၁၄ ရက်နေပြီးပါက ထပ်မံစစ်ဆေးပြီးမှ အပြင်သွား လာခွင့်ပြုမည်ဟုလည်း ဒေါက်တာ ဟန်နိုင်စိုး ကပြောသည်။ “ အဖွား က Negative နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီး နေကောင်းတာကြားရတော့ ဝမ်းသာပါတယ်။ အသက်ကလည်း ကြီးပြီးဆိုတော့ စိတ်တော့ပူတယ်။ မဟုတ်ရင် အားလုံးက ဒီရောဂါကို စိုးရိမ်နေကြတာ” ဟု မူဆယ်ဒေသခံ အမျိုးသမီး တဦးက ပြောသည်။
မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ် မူဆယ်မြို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ တဦး ကို ဧပြီ ၂၄ ရက် တွင် ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန က ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် တင်းကြပ်သည့် စည်းကမ်းများထုတ်ပြန်ကာ တပိုင်တနိုင် ခြံထွက် သီးနှံ များ တရုတ်နယ်စပ်သို့ ဖြတ်သန်းရောင်းချခွင့်မရတော့သည့် အခြေအနေဖြစ်ခဲ့သည်။ https://burmese.shannews.org/ archives/16466
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ်တွင် ကျပ်သိန်း ၂,၆၀ဝ ကျော်တန်ဖိုးရှိ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ သယ်ဆောင် လာ သည့် မော်တော်ယာဉ်အား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ မေလ ၇ ရက် နံနက်က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ကျေးသီးမြို့နယ် မိုင်းနောင်မြို့အဝင်တွင် နယ်မြေလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေစဉ် ဝမ်ဆင်းဘက်မှ မိုင်းနောင်သို့ မောင်းနှင်လာသည့် ကုန်တင်ယာဉ် တစ်စီးကို စစ်ဆေးရန် ရပ်တန့်ခိုင်းရာ ၎င်းယာဉ်မှာ နောက်ပြန်လှည့်၍ မောင်းနှင် ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန် သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့က လိုက်လံတားဆီးရာ ၎င်းယာဉ်ပေါ် လိုက်ပါလာသည့် ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် အမျိုးသားနှစ်ဦးက ကုန်တင် ယာဉ်ကို ရပ်တန့်ထားခဲ့ပြီးနောက်တွင် ကပ်လျက်လိုက်ပါလာသည့် Vigo အမျိုးအစား ကိုယ်ပိုင်ယာဉ် ပေါ်တက်၍ ဆက်လက် မောင်းနှင် ထွက်ပြေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ကုန်တင်ယာဉ်မောင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ် ချစ်ဝင့်သူနှင့် ယာဉ်အကူဖြစ်သူ မူဆယ်မြို့နေ (၂၆)နှစ်အရွယ် လှိုင်ဝေဦးတို့ နှစ်ဦးကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ပေါ်မှ မူ ဆယ်မြို့နေ အမျိုးသားနှစ်ဦးတို့ကို ဖမ်းမိခဲ့သည်။ ကုန်တင်ယာဉ်ကို စစ်ဆေးရာ ယာဉ်ပေါ်တွင် ပလတ်စတစ်ပီပါ၊ သံပီပါများ ဖြင့် ထည့်သွင်းသယ်ဆောင်လာသည့် ကျပ်သိန်း ၂,၆၅၆ တန်ဖိုးရှိ ထိန်းချုပ် ဓာတုပစ္စည်း အီသိုင်းအက်စီတစ် အရည်များကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သည်။
‘‘ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေက မူးယစ်ဆေးဝါးချက်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်း တွေပါ။ နောက်ပြီး သူတို့လေးယောက်က ဒီပစ္စည်းတွေကို အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီး သယ်ဆောင်လာတာကို စစ် ဆေးတွေ့ရှိရပါ တယ်’’ဟု ကျေး သီးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာ ရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။ https://7day.news/detail?id=185743
ကချင်ပြည်နယ်မှ တစ်ဦးတည်းသော COVID -19 လူနာ Case 144 မှာ စစ်ဆေးချက်အရ Negative နှစ်ကြိမ်ပြသဖြင့် ဆေးရုံဆင်းကာ သီးခြား Quarantine ဖြင့် နေထိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ COVID-19 လူနာအမှတ် ၁၄၄ သည် ဧပြီ ၄ ရက်ခန့်မှစတင်ကာ ကိုယ်လက်များ ထိုင်းမှိုင်းခြင်း ကိုခံစားရကြောင်း ဧပြီ ၇ ရက်၊ ၈ ရက်များတွင် ပြင်ပဆေးခန်းပြသခဲ့ ကြောင်း၊ အံသွားများနာသည့်အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ အသက်ရှူမဝသည့် အခြေအနေကြုံတွေ့ခဲ့ကြောင်း၊ လူလည်း ထိုင်းမှိုင်းနေကြောင်း၊ အလုပ်သမား ဆေးခန်းတွင်လည်း ပြသခဲ့ရကြောင်း၊ ရန် ကုန်မှ ဧပြီ ၁၅ ရက်တွင် လူမှုကူညီရေးကားဖြင့် မိုးညှင်းသို့ ထွက်ခွာလာကြောင်း၊ ဧပြီ ၁၆ရက် မိုးညှင်းမြို့သို့ရောက်ရောက်ခြင်း Quarantine ဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဧပြီ ၂၁ ရက်တွင် ဓာတ်ခွဲနမူနာ ယူခဲ့ကြောင်း၊ မည်သည့်နေရာမှကူးသည်ကို အစရှာမရကြောင်း၊ ရန်ကုန်တွင် အခန်းအတူ နေမှလွဲ၍ သီးခြား လုပ်ကိုင်ရသည့်အခြေအနေဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ပခရီးလုံးဝမရှိကြောင်း သိရသည်။
လူနာအမှတ် ၁၄၄ က “ရောဂါမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ အရမ်းပေါ့သွားတယ်။ ကျွန်တော် ခံစားရတာကတော့ ကိုယ်လက်ထိုင်းပြီး ဖျားချင်တာ အရင်ဖြစ်တာ။ အသက်ရှူမဝတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဆေးရုံတက်ပြီးနောက်မှ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တာ ဘာမှမရှိဘူး။ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေကလည်း ဘာမှမလိုအောင်ကူညီ ပေးကြတယ်။ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပိုးတွေ့တဲ့ လူနာတွေ ကိုလည်း ဘာမှအားမငယ်စေချင်ဘူး။ အချိန်တန်ရင် သူ့ဟာသူ ပျောက်သွားမှာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။
အသက် ၂၄ နှစ် အရွယ်ရှိ မိုးညှင်းမြို့မှ COVID-19 လူနာမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ဖိနပ်စက်ရုံတစ်ရုံတွင် လွန်ခဲ့သည့် မတ်လနှောင်းပိုင်းက တရုတ်စကားပြန်အဖြစ် လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ကြောင်း၊ စက်ရုံဝင်းအတွင်းရှိ အခန်း ၁၈ ခန်းပါ တိုက် ခန်း အမှတ် ၁၆ တွင် တရုတ်လူမျိုးတစ်ဦးနှင့် အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန စာရင်းများအရ ရန်ကုန်မြို့သို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့သည့် ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း ၅၃၈ ဦး တွင် တစ်ဦးတွေ့ရှိရပြီး ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၄၈၇ တွင် မတွေ့ရှိရကြောင်း၊ ဓာတ်ခွဲအဖြေစောင့် ဆိုင်းနေသူ ၅၀ ရှိကြောင်း မေ ၁၀ ရက် က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် မေ ၁၀ ရက်အထိ ဆေးရုံ၊ နေအိမ်၊ လူမှုအဆောင်အအုံ ၅၃၆ခု တွင် လူဦးရေ ၆၇၂၃ ဦးမှာ Quarantine ဝင် နေဆဲဖြစ်ပြီး ၈၆၆၈ ဦး Quarantine လွန်မြောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/173087
မူဆယ်မြို့ရှိ ပြည်တော်ပြန် လက်ခံကြိုဆိုရေး စခန်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ထောင်ကျော် သောင်တင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေးကော်မတီ၊ ကြိုဆို လက်ခံရေးကော်မတီမှ ၎င်းတို့စီစဉ်ပေးသော ကားများဖြင့် လားရှိုးသို့ ပို့ဆောင်ပေးရာ အချို့မှာ သုံးရက်ခန့် သောင်တင်နေမှု များ ရှိနေသောကြောင့် နေထိုင်စား‌သောက်‌ရေးနှင့် သန့်စင်ခန်းများ အတွက်ပါ ဒုက္ခရောက်နေကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် မူဆယ်မြို့နယ်ရှိ နန်းတော်ဂိတ်သို့ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော မြန်မာနိုင်ငံသာ များမှာ တစ်ရက်လျှင် ၅၀ဝ ဦးခန့်ရှိပြီး ၎င်းတို့အား သက်ဆိုင်ရာက ကျန်းမာရေး စစ်းဆေးပေးနေပြီး သံသယလူနာတွေ့ရှိပါက စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် ကုသပေးနေကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ နန်းတော်ဂိတ်မှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော မြန်မာနိုင်ငံ သားများမှာ ဧပြီ ၃ ရက် မှ မေ ၁၁ အထိ တစ်သောင်း ဝန်းကျင်ခန့် ရှိနေပြီး မူဆယ်မြို့နယ် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်း ချုပ် ကုသရေးကော်မတီ၊ ကြိုဆိုလက်ခံရေး ဆပ်ကော်မတီက စနစ်တကျ လက်ခံပြီး မြို့နယ်ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဌာနက Fever Surveillance များပြုလုပ်ကာ ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာသူများအား ၎င်းတို့အစီအစဉ်ဖြင့် နေရပ်ဒေသသို့ ပြန်နိုင်ရန်စီစဉ် ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အစီအစဉ်ဖြင့် ပြည်တော်ပြန်များအား ရထားဖြင့် ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်ထားသောကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်များမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာသူများအား လားရှိုးမြို့မှ အလှည့်ကျလက်ခံပြီး ရထားဖြင့် ၎င်းတို့၏ နေရပ်ဒေသအသီးသီးသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာစေလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ https://news-eleven.co m/article/173103
၁။ COVID-19 စဈဆေးစခနျး မီးရှို့ဖကျြဆီးခံရမှုအပျေါ JMC-S သို့ KNU တိုငျကွားစာပေးပို့
၂။ “ဝ”နှငျ့ မိုငျးလားတပျဖှဲ့တို့ကို ကာခြုပျတှဆေုံ့၊ မိမိတိုငျးပွညျကို အားကိုးစိတျ မှေးရနျတိုကျတှနျး
၃။ ဖလုံ-စဝျေါပါတီမှ ရှေးကောကျပှဲဝငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအား ရှေးခယျြမညျ
၄။ အစိုးရနှငျ့ အပဈရပျမြား COVID-19 ကာကှယျရေး အခကျြ ၇ ခကျြသဘောတူ
၅။ မူဆယျမွို့အဝငျ တိုးဂိတျ ဗုံးခှဲ တိုကျခိုကျခံရ
၆။ သွဂုတျ ၃၁ ရကျအထိ အပဈအခတျရပျစဲကွောငျး တပျမတျောကွညော
၇။ KNU နှငျ့ မွနျမာ့တပျမတျောပဈခတျမှု နောကျဆကျတှဲ ဝါသိုခိုရှာလုံးကြှတျထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေ
၈။ မွပေုံနဲ့ ပုဏ်ဏားကြှနျး ရှာနှဈရှာက လူငယျတှနေဲ့ လူလတျပိုငျးတှကေို တပျမတျောဖမျးဆီး
၉။ ဝါရာဇှပျဒသေခံမြားတောငျးဆိုသညျ့ စားကကျြမွေ မသတျမှတျပေးနိုငျကွောငျး အစိုးရအကွောငျးပွနျ
၁၀။ ကုလားတနျ စီမံကိနျး အခြိနျမီ မပွီးတော့ဘဲ MOU သကျတမျး တိုးမညျ
၁၁။ ကြောကျတျောတှငျ ပေါကျကှဲမှုဖွဈ ကြောငျးဆရာ ၁ ဦးနှငျ့ ကလေးငယျ ၁ ဦး ဒဏျရာရ
၁၂။ တာခြီလိတျခရိုငျ တပတျအတှငျး ကပျြသိနျး ၄၀ဝဝ ခနျ့ရှိ မူးယဈဆေးမြား သိမျးဆညျးရမိ
၁၃။ DKBA တပျဖှဲ့ဝငျမြား ခရီးသှားမညျဆိုက ဆိုငျရာ ဆကျဆံရေးရုံးသို့ အကွောငျးကွားရနျ အမိနျ့ထုတျထား
၁၄။ တောငျကုတျတှငျ မွို့ခံ ၃ ဦး အကွမျးဖကျ ဥပဒဖွေငျ့ ဖမျးဆီးအမှုဖှငျ့ခံရ
၁၅။ မညျသညျ့အဖှဲ့အစညျးကိုမှခနျြလှပျမထားဘဲ တပျမတျောအနဖွေငျ့ တဈနိုငျငံလုံးအပဈရပျစဲပေးသငျ့ကွောငျး မှနျပွညျ သဈ ပါတီ ဥက်ကဌတိုကျတှနျး
၁၆။ မွဈကွီးနားရှိ FQ မြားကို အစားအသောကျထောကျပံ့နသေညျ့ ပရဟိတအဖှဲ့မြား ခတ်ေတရပျနားမညျဟုဆို
၁၇။ အစိုးရနှငျ့ KNU နှဈဘကျ စဈရေးတငျးမာမှုကိစ်စ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေး
၁၈။ တပျမတျော အပဈရပျကွညောခကျြအပျေါ အကဲခတျတှေ မေးခှနျးထုတျ
၁၉။ ဘူးသီးတောငျက စဈဘေးဒုက်ခသညျတှေ ရိက်ခာလိုအပျနေ
၂၀။ ဆှမျပရာဘှမျမွို့အနီး ငလငျြလှုပျ
၂၁။ သံဖွူဇရပျမွို့နယျတှငျ မူးယဈဆေးဝါးဝယျယူသူ ၃၇ ဦးကို KNU ဖမျးဆီး၊ လူတဈဦး ၅ သိနျးနှငျ့ ဆိုငျကယျတဈစီး ၅ သိနျးစီ ဒဏျငှခေမြှတျ
၂၂။ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခမြားကွောငျ့ ဧပွီအတှငျး လူ ၇၁ ဦးသဆေုံးဟု အစီရငျခံစာဖျောပွ၊ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ တိုကျပှဲ အမြားဆုံး ဖွဈဟုဆို
၂၃။ ကယားပွညျနယျသို့ လာရောကျသူမြား ခရီးသှားထောကျခံခကျြ ပွရမညျ
၂၄။ ရခေမျးခွောကျလာသညျ့ မျောလမွိုငျ ရှနေတျတောငျဆညျရပေေးဝမှေု နှဈပတျစာခနျ့သာ အဆငျပွတေော့မညျဟုဆို
၂၅။ မူဆယျ ကိုဗဈ-၁၉ လူနာ ဆေးရုံ ဆငျးခှငျ့ ရ
၂၆။ ကပျြသိနျး ၂,ဝဝဝ ကြျော တနျဖိုးရှိ ထိနျးခြုပျဓာတုပစ်စညျးမြား သယျဆောငျလာသူလေးဦး ကို ဖမျးဆီး
၂၇။ ကခငျြပွညျနယျမှ COVID -19 လူနာ Case 144 မှာ စဈဆေးခကျြအရ Negative နှဈကွိမျပွသဖွငျ့ ဆေးရုံဆငျးကာ သီးခွား Quarantine ဖွငျ့ နထေိုငျ
၂၈။ မူဆယျမွို့ရှိ ပွညျတျောပွနျ လကျခံကွိုဆိုရေး စခနျးတှငျ လူတဈထောငျကြျော သောငျတငျနေ
ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး-KNU တပျမဟာ (၅)အနဖွေငျ့ မလေ ၆ ရကျနကေ့ ၎င်းငျးတို့၏ COVID-19 စဈ ဆေးရေးစခနျး (၂)ခုကို တပျမတျောက ဝငျရောကျ မီးရှို့ဖကျြဆီးမှုနှငျ့ ပတျသကျပွီး ကရငျပွညျနယျ ပဈခတျ တိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေးဆိုငျရာ ပူးတှဲစောငျ့ကွညျ့ရေး ကျောမတီ(JMC-S)ကို ယနေ့ (မေ ၈ရကျ) တိုငျကွားစာ ပေး ပို့လိုကျသညျ။
ကအေဲနျယူအနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့ထိနျးခြုပျနယျမွအေတှငျး ကနျြးမာရေး လုပျငနျးမြားအကောငျအထညျဖျောဆောငျ ရှကျနစေဉျ မွနျမာ့တပျမတျော အမှတျ(၈) စဈဆငျကှပျကဲရေး ဌာနခြုပျ၏ လကျအောကျခံ ခွမွေနျတပျ ရငျး (ခမ ရ-၄၀၅)၏ ယာယီ တပျရငျးမှူး လှိုငျထှနျးဦးဆောငျသညျ့ အငျအား (၂၀)ခနျ့က ကအေဲနျယူ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြား စိုကျထူထားသညျ့ ကနျြးမာ ရေး အသိပညာပေးဆိုငျးဘုတျမြားနှငျ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးရေးဂိတျ တဲမြားကို မီးရှို့ဖကျြဆီးမှုမြားနှငျ့ ရနျထောငျခွိမျးခွောကျမှု မြားပွုလုပျခဲ့ကွောငျး တိုငျကွားစာ၌ ဖျောပွထားသညျ။ ထိုသို့ ဝငျရောကျဖကျြဆီးခံရမှုကွောငျ့ ကအေဲနျယူ၏ လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ (ခမရ-၄၀၅) တပျရငျးတို့အကွား ထိပျတိုကျရငျဆိုငျတိုကျပှဲ နှဈကွိမျဖွဈပှားခဲ့သလို (ခမရ-၄၁၀) တပျရငျး တပျဖှဲ့မြားနှငျ့လညျး ၎င်းငျးနတှေ့ငျလညျး ထိပျတိုကျပဈခတျမှုဖွဈပှားခဲ့ပွီး စုစုပေါငျးပဈခတျမှု ၃ ကွိမျဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး ကအေဲနျယူ ဘကျက ဆို သညျ။
KNU သညျ တဈနိုငျငံလုံးပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေး သဘောတူ စာခြုပျ(NCA)ကို သဘောတူ လကျမှတျရေး ထိုးထားသညျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ (၁၀)အဖှဲ့အနကျ တဈဖှဲ့အပါအဝငျဖွဈသညျ။ အစိုးရ၊တပျမတျောနှငျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးမြားအကွား သဘောတူလကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ NCA စာခြုပျအရ နှဈဖကျလေးစားလိုကျနာရမညျ့ ပဈခတျ တိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးဆိုငျရာ စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားနှငျ့ စဈဘကျဆိုငျရာကငျြ့ဝတျမြား၏ အခနျး (၂)၊ အပိုဒျ(၇)၊ အပိုဒျခှဲ (က) အရ ပွညျသူ လူထု၏ စားဝတျနရေေး၊ ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေးနှငျ့ ဒသေန်တရဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးတို့အတှကျ လိုအပျသောပံ့ပိုး ကူညီမှု မြား ညှိနှိုငျးပူး ပေါငျးဆောငျရှကျရနျပါရှိသညျ။ http://kicnews.org/2020/05/covid19%e1%80%85%e1%80 %85%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%86%
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျဟာ NDAA (မိုငျးလား) အဖှဲ့နဲ့ UWSA (ဝ) အဖှဲ့တို့က တာဝနျရှိတှနေဲ့ သီးခွားစီတှဆေုံ့ပွီး COVID-19 ရောဂါထိနျးခြုပျကာကှယျရေး အထောကျအကူပွုပစ်စညျးတှေ ပေးအပျခဲ့ တယျလို့ တပျမတျောက သတငျးထုတျပွနျပါတယျ။ မလေ ၁၀ ရကျ မှနျးလှဲပိုငျးက တွိဂံဒသေတိုငျးစဈဌာနခြုပျ၊ ရှတွေိဂံရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမ ဆောငျမှာ NDAA(မိုငျးလား)အဖှဲ့မှ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးစိုငျးလငျးခေါငျးဆောငျတဲ့အဖှဲ့တှနေဲ့ UWSA (ဝ) အဖှဲ့မှ ဦးညီကပျ ခေါငျးဆောငျတဲ့ အဖှဲ့ဝငျတှကေို ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက လကျခံတှဆေုံ့ခဲ့တာပါ။
ဒီလိုတှဆေုံ့ရာမှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ကမ်ဘာပျေါမှာ COVID-19 ရောဂါဖွဈပှားသူပေါငျး ၄ သနျးကြျောရှိပွီ ဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈပှားသူ ပေါငျး ၁၇၈ ဦးရှိပွီဖွဈကွောငျး၊ အဆိုပါ ရောဂါဟာ မမွငျရ၊ မကွားရ၊ အနံ့ခံ မရနိုငျတာ ကွောငျ့ လူတိုငျးကိုယျစီအသိစိတျနဲ့ သတိထားနထေိုငျကွရမညျဖွဈကွောငျး၊ မိုငျးလားဒသေမှာ အရပျဘကျဆရာဝနျ မလုံ လောကျပါက တပျမတျောဆေးအဖှဲ့တှေ စလှေတျပေးမယျလို့ ပွောပါတယျ။ မွနျမာစာ၊ မွနျမာစကားနဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာယဉျကြေးမှု သငျတနျးတှေ သငျကွားပေးဖို့ နယျစပျက ပွနျဝငျလာပွီး Qurantine ထားရှိသူတှရေဲ့ အခကျြအလကျတှကေို မှတျတမျးထား ရှိဖို့၊ သှားလာမှုစညျးကမျးတှေ စနဈတကလြိုကျနာကွဖို့၊ ဆေးစဈလိုပါက ကြိုငျးတုံမှာလာစဈဆေးဖို့နဲ့ မိမိတိုငျးပွညျကို အားကိုးစိတျ မှေးရနျလိုတယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။
NDAA (မိုငျးလား) အဖှဲ့နဲ့ UWSA (ဝ) အဖှဲ့တို့ကလညျး သူတို့ဒသေမှာ COVID-19 ရောဂါဖွဈပှားသူ မရှိသေးကွောငျးနဲ့ ဖွဈပျေါလာပါက အသုံးပွုနိုငျဖို့ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးတှေ အသငျ့ပွငျဆငျထားသလို နယျစပျဝငျပေါကျတှမှောလညျး ဇနျနဝါရီလ ကတညျးက စဈဆေးဆောငျရှကျနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။ NDAA (မိုငျးလား) အဖှဲ့နဲ့ UWSA (ဝ) အဖှဲ့တို့အတှကျ တပျမတျော က တဈဖှဲ့လြှငျ PPE ဝတျစုံ ၅၀ဝ စုံ၊ Surgical Masks ၁၀ဝဝဝ ခု၊ Goggles ၁၀ဝ ခု၊ Surgical Gloves ၁၀ဝဝ ခု၊ Bleaching Powder ၂ ပုံး၊ Non-Contact Thermometer ၅၀ ခု၊ Hand Gel ၂၅၀ ဘူးနဲ့ N 95 Mask ၅၀ဝ ခုနဲ့ စားသောကျဖှယျရာတှေ ထောကျပံ့ပေးခဲ့တယျလို့ တပျမတျော ထုတျပွနျခကျြအရ သိရပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/387134
ကိုဗဈ-၁၉ ကွောငျ့ နှောငျ့နှေးနရေသညျ့ ပါတီကိစ်စမြားအတှကျ ကရငျပွညျနယျ အခွစေိုကျ ဖလုံ-စဝျေါ ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (PSDP)က လာမညျ့ ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီအထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျ လောငျး စိစဈရှေးခယျြမှုမြားကို မလေအတှငျး ပွုလုပျသှားရနျ စီစဉျနကွေောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို စိစဈရှေးခယျြနိုငျရေးအတှကျ ယခု မလေအတှငျး ပါတီ အစညျးအဝေး တဈရပျချေါယူ ကာ ဆုံးဖွတျခကျြရယူသှားမညျဖွဈကွောငျးလညျး PSDP ဥက်ကဋ်ဌ စောခငျမောငျမွငျ့က ကအေိုငျစီ သို့ ယခုလိုပွောသညျ။ “ဧပွီ လ ကတညျးက အစညျးအဝေးထိုငျဖို့ လြာထားပမေယျ့ Covid-19 ကွောငျ့ မလုပျဖွဈဘူး။ ဒီ မလေအတှငျး မှာတော့ လုပျဖို့ လြာထားတယျ။ ရှေးကောကျပှဲ မဲဆှယျကာလက သိပျမလိုတော့ဘူးလေ။ ဒါကွောငျ့ (ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ) တောငျးတဲ့ခါ အဆငျသငျ့ဖွဈအောငျပေါ့” ဟု ၎င်းငျးက ယနေ့(မေ ၈ ရကျ)တှငျ ပွောသညျ။
ရှေးကောကျပှဲဝငျခငျြသော သူမြားမှ ပုဂ်ဂိုလျရေးအခကျြအလကျမြား၊ ပညာအရညျအခငျြး၊ အလုပျအကိုငျ၊ နရေပျ လိပျစာမြားကို အဆိုပွု လြှောကျလှာဖောငျ၌ ဖွညျ့သှငျးပွီးနောကျ ရှေးခယျြရေး ကျောမတီဝငျမြားက အစညျး အဝေးထိုငျကာ အဖကျဖကျမှ ပွနျလညျဆုံးဖွတျပေးရမညျဖွဈကွောငျးလညျး PSDP တာဝနျရှိသူထံမှ သိရသညျ။ ကရငျပွညျနယျတှငျသာ အဓိကထား ယှဉျပွိုငျ သှားရနျရှိသညျ့ PSDP အနဖွေငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအား ရှေးခယျြသှားရနျ ရှိနသေလို မဲဆန်ဒနယျမွေ မထပျရေးအတှကျ အခွားသော ညီနောငျကရငျပါတီမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျး ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျးလညျး စောခငျမောငျမွငျ့ က ပွောသညျ။
လကျရှိတှငျ ကရငျပွညျနယျအခွစေိုကျ ဖလုံ-စဝျေါဒီမိုကရကျတဈပါတီ(PSDP) နှငျ့ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျ တဈပါတီ (KNDP)၊ ရနျကုနျအခွစေိုကျ ကရငျပွညျသူ့ပါတီ(KPP) နှငျ့ ကရငျအမြိုးသား ပါတီ(KNP)တို့ တရားဝငျ နိုငျငံရေးပါတီမြားအဖွဈ ရပျတညျလကျြ ရှိသညျ။ http://kicnews.org/2020/05/%e1%80%96%e1%80%9c%e1%80%b6%e1%80%af
အစိုးရ၏ Covid-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးဆိုငျရာ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့မြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးပူးပေါငျးရေး ကျောတီသညျ တနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ (NCA) ရေးထိုးထားသော အပဈရပျ ၁၀ ဖှဲ့နှငျ့ မလေ ၈ ရကျနကေ့ ဆှေးနှေးကွသညျ။ အဆိုပါ COVID-19 ဆိုငျရာ လုပျငနျးညှိနှိုငျး အစညျးအဝေးကို အှနျလိုငျးရုပျသံ (Online Video Conferencing) ပုံစံဖွငျ့ သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျး ကိုယျစားပွု ကိုယျစားလှယျ ၂၀ ကြျောက ဆှေးနှေးခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး အခကျြ ၇ ခကျြ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
အစိုးရ၏ COVID-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးဆိုငျရာ EAO မြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးပူးပေါငျးရေး ကျောမတီ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ အငွိမျးစား ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး ခငျဇျောဦး က “ကနြျောတို့ဘကျကတော့ ကနြျောတို့ကျောမတီတှအေားလုံး တကျပါတယျ။ သူတို့ဘကျ ကလညျး EAO ခေါငျးဆောငျတှတေကျကွပါတယျ။ ဒီဆှေးနှေးပှဲက ကောငျးပါတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ပွောသညျ။ အစညျး အဝေးတှငျ ရောဂါကာကှယျရေးထိနျးခြုပျရေးအတှကျ နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာ ကိစ်စမြား ၊ ပစ်စညျးပံ့ပိုးရေးကိစ်စမြား အစရှိသညျတို့ ကို အစိုးရနဲ့ EAO မြားအကွား အပွနျအလှနျ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျကွရနျအပါအဝငျ ရောဂါကုသနိုငျရေးအတှကျ အစိုးရနှငျ့ EAO မြားအကွား သတငျးအခကျြအလကျ ဖလှယျခွငျးနှငျ့ အနီးစပျဆုံး ဆေးရုံမြားသို့ ပို့ဆောငျကုသရေးကို အပွနျအလှနျ ညှိနှိုငျး ဆောငျရှကျကွရနျ သဘောတူညီခဲ့ကွောငျး ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။ KNU အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူးခြုပျ ပဒိုစောတာဒိုမှူးကလညျး အစိုးရ၏ ညှိနှိုငျးပူးပေါငျးရေးကျောမတီနှငျ့ အပဈရပျစာခြုပျ လကျမှတျထိုးထားသညျ့ EAO မြားဆှေးနှေးပှဲသညျ COVID-19 ကာကှယျရေးကို အစိုးရနှငျ့ EAO မြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရာတှငျ မညျကဲ့သို့အခွခေံမူမြားဖွငျ့ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျကွမညျကို ဆှေးနှေးကွခွငျး ဖွဈကွောငျး ပွောသညျ။
“COVID-19 ကာကှယျ ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ စပျလဉျြး၍ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျး ပူးပေါငျးရေး ကျောမတီ” ကို နိုငျငံတျောသမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့က (EAO)မြား ထိနျးခြုပျထားသညျ့ ဒသေတှငျး နထေိုငျသူမြားအား ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု ပေးရနျ ရညျရှယျကာ ဧပွီ ၂၇ ရကျတှငျ ဖှဲ့စညျးလိုကျခွငျးလညျး ဖွဈသညျ။ ယငျးကျောမတီတှငျ အစိုးရနှငျ့ EAO မြားကွား သတငျး အခကျြအလကျ ဖလှယျရနျ၊ EAO မြားနှငျ့ ပွညျနယျအစိုးရကွား ပူးပေါငျးရေး ဆောငျရှကျပေးရနျ၊ EAO ဒသေအတှငျး ရောဂါလက်ခဏာ ပွလာသူမြားရှိပါက စောငျ့ကွပျကုသမှု ပေးနိုငျရေး ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျကွရနျ အပါအဝငျ ရောဂါနှငျ့ပတျသကျ၍ နညျးပညာဆိုငျရာ ပူးပေါငျးရေးဆောငျရှကျရနျ စသညျ့လုပျငနျးတာဝနျ ၇ ရပျ ရှိသညျ။ https://burma. irrawaddy.com/news/2020/05/09/222267.html
ရှမျးပွညျနယျ(မွောကျပိုငျး)၊ မူဆယျမွို့အဝငျ Oriental Highway (OHC) တိုးဂိတျကို တနင်ျလာနေ့ ည(၈)နာရီခှဲ အခြိနျ လောကျမှာ အမညျမသိ ဆိုငျကယျစီးသူ နှဈဦးက ဗုံးလို့ ယူဆရတဲ့ အရာနဲ့ လာရောကျပဈခတျ သှားတာကွောငျ့ ပေါကျကှဲမှု ဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ အစိုးရ ပွနျကွားရေး သတငျးမှာ ဖျေါပွပါတယျ။
ဒီ ပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ (OHC) တိုးဂိတျငှကေောကျကောငျတာ တာဝနျကြ ကိုမြိုးထကျနိုငျ ဒဏျရာအနညျးငယျရသှားပွီး၊ တိုးဂိတျ ကောငျတာ (၃)ခု အမိုးလနျ မှနျကှဲ သှားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
(OHC) တိုးဂိတျကို ဗုံးနဲ့လာပဈသူနှဈဦးက တော့ မူဆယျ မွို့ရှောငျလမျးအတိုငျး ဆိုငျကယျနဲ့ မောငျးပွေး တိမျးရှောငျသှားပွီး ခုခြိနျထိ စုံစမျးနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/muse-oriental-highway-bomb-attack-/5415462
မလေ ၁၀ ရကျနမှေ့ သွဂုတျ ၃၁ ရကျအထိ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲထားကွောငျး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီး ခြုပျရုံးက မလေ ၉ ရကျနစှေဲ့နဲ့ ထုတျပွနျကွညောပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ COVID-19 ရောဂါထိနျးခြုပျ၊ ကာကှယျ၊ ကုသရေးလုပျငနျး တှေ ပိုမိုထိရောကျ လငျြမွနျကယျြပွနျ့စှာ ဆောငျရှကျနိုငျရေးနဲ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ တပျမတျောအနနေဲ့ နိုငျငံတကာ စံနှုနျးအတိုငျး နိုငျငံတျောက အကွမျးဖကျဟု သတျမှတျကွညောထားတဲ့ အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးတှရှေိနတေဲ့ နရောမြားမှအပ ကနျြနယျမွတှေမှော ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ မလေ ၁၀ ရကျမှ သွဂုတျလ ၃၁ ရကျနအေ့ထိ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲထားကွောငျးကွညောခကျြမှာ ဖျောပွပါတယျ။ ကမ်ဘာအနှံ့မှာ COVID-19 ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါနဲ့ ရငျဆိုငျနရေတာကွောငျ့ ကမ်ဘာတဝနျး လကျရှိ ဖွဈပှားနတေဲ့ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခတှေ ရပျတနျ့ပေးကွဖို့ ကုလသမဂ်ဂ အတှငျးရေးမှူးခြုပျက တိုကျတှနျးထားသလို မွနျမာ နိုငျငံမှာလညျး ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ COVID-19 ထိနျးခြုပျ၊ ကာကှယျ၊ ကုသရေးအတှကျ နိုငျငံတျောက ဆောငျရှကျနတောကို တပျမတျောကလညျး ပါဝငျ ကူညီဆောငျရှကျနတေယျလို့လညျးဆိုပါတယျ။
အခုလို အပဈရပျ ကွညောထားတဲ့ကာလမှာ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးတှအေားလုံးအနနေဲ့ တပျမတျော ကာကှယျ ရေးဦးစီးခြုပျရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးမူဝါဒ ၆ ခကျြအနကျ ၄ ခကျြကို အလေးအနကျ လိုကျနာကွဖို့လညျး တပျမတျောက တိုကျတှနျးပါတယျ။ အဆိုပါ ၄ ခကျြကတော့ သဘောတူစာခြုပျမြားအတိုငျး ကတိတညျရနျ၊ ငွိမျးခမျြးရေး သဘောတူညီ ခကျြမြားအပျေါ အမွတျမထုတျရနျ၊ ဒသေခံပွညျသူမြားအပျေါ ဝနျထုပျဝနျပိုးမဖွဈစရေနျ၊ နိုငျငံတျောက ထုတျပွနျထားသညျ့ တညျဆဲဥပဒမြေားကို လိုကျနာရနျတို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အခငျြးခငျြး တဈဖှဲ့နှငျ့တဈဖှဲ့ အပွနျအလှနျ တိုကျခိုကျတာနဲ့ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားတှအေပျေါ အနိုငျကငျြ့တာတှမေလုပျဖို့၊ နိုငျငံတျောအစိုးရရဲ့ အုပျခြုပျမှု ယန်တရားအဆငျ့ဆငျ့ကို လညျးကောငျး၊ လမျးပနျး ဆကျသှယျမှု လုံခွုံခြောမှစေ့ရေေးကို လညျးကောငျး၊ ပွညျသူလူထုရဲ့ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျနဲ့ အကြိုးစီးပှားတှကေို လညျးကောငျး မထိခိုကျအောငျ တာဝနျယူဖို့နဲ့ မလိုကျနာရငျ တပျမတျော အနနေဲ့ လိုအပျသလို အရေးယူဆောငျရှကျသှားမယျလို့လညျး သတိပေးထားပါတယျ။
မွောကျပိုငျးမဟာမိတျတိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ ၃ ဖှဲ့ဖွဈတဲ့ ကိုးကနျ့ (MNDAA) ၊ တအောငျး (TNLA)နဲ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA)တို့ကလညျး တဖကျသတျ အပဈရပျကွောငျး မကွာခဏ ကွညောခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒီလို ပဈခိုကျတိုကျခိုကျမှုတှေ ရပျစဲ ကွောငျး ကွညောထားတဲ့ကွားကပဲ တိုကျပှဲတှကေတော့ ရပျတနျ့ခွငျးမရှိဘဲ ဆကျလကျဖွဈပှားနတောဖွဈပါတယျ။ http://bur mese.dv b.no/archives/387002
KNU -ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး မူတွျော(ဖာပှနျ)ခရိုငျ (တပျမဟာ-၅) လကျအောကျခံ ကရငျအမြိုးသား လှတျမွောကျရေး တပျမတျော-KNLA တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ မွနျမာ့တပျမတျောတို့အကွား မလေ ၆ ရကျနကေ့ ဖွဈပှား ခဲ့သညျ့ ပဈခတျမှုမြားကွောငျ့ ဖာပှနျမွို့နယျ ဝါကျောကြေး ကြေးရှာအုပျစုအတှငျးရှိ ဝါသိုခိုကြေးရှာမှ ရှာသားမြားမှာ ရှာလုံးကြှတျထှကျပွေးတိမျးရှောငျ နရေကွောငျး သိရသညျ။
ဖာပှနျ- ကမမောငျးကွားရှိ ဝါသိုခိုကြေးရှာနှငျ့ ဖားလို့လမျးခှရှိ KNU မူတွျောခရိုငျ၏ COVID-19 ရောဂါကာကှယျ တားဆီးရေး ဂိတျ(၂)ခုကို မွနျမာ့တပျမတျောက မလေ ၆ ရကျနတှေ့ငျ ဝငျရောကျ မီးရှို့ဖကျြဆီးခဲ့ခွငျးကွောငျ့ နှဈဖကျအကွား တငျးမာမှု ဖွဈပှားခဲ့ပွီးနောကျ ယငျးနေ့ နလေ့ညျတှငျ အပွနျအလှနျ ပဈခတျမှုမြား ဖွဈပှားခဲ့ သညျ့အတှကျ ဝါသိုခိုရှာသား ၄၈၀ ကြျောမှာ ထိုသို့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျးခဲ့ရခွငျး ဖွဈသညျ။ အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး ဝါကျောကြေး ကြေးရှာအုပျစု အုပျခြုပျရေးမှူး စောလှဌေးဦးက “ စဖွဈတာနဲ့ ရှာလုံး ကြှတျထှကျပွေးကွရတာပါပဲ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အရငျတဈခါတုနျးက ဖွဈတာ ရှာသား ၂ ယောကျထိ ဘူး တယျလေ။ အခုရှာမှာ ရှာကိုထိနျးတဲ့သဘောအနနေဲ့ လူကွီးသုံးလေးယောကျ လောကျပဲကနျြ တယျ။ အိမျခွေ ကတော့ ၇၀ ကြျော၊ လူဦးရကေတော့ ၄၈၀ ကြျောရှိတယျ” ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။
ဖာပှနျမွို့နယျ ဝါကျောကြေး ကြေးရှာအုပျစုအတှငျးတှငျ ဝါကျောကြေး၊ ကြှနျးတော၊ တံတားဦး၊ ဝါးဒူး ၊ ဝါသိုခိုနှငျ့ မိဇိုငျးခြောငျး ဖြား(မယျကြိခီး) စသညျ့ကြေးရှာမြားပါဝငျပွီး ယခုဖွဈစဉျတှငျ ပဈခတျမှုနှငျ့ ကိုကျအ နညျးငယျသာ ကှာဝေးသညျ့ ဝါသိုခို ကြေးရှာမှ ရှာသားမြားသာ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျခဲ့ကွရသညျဟု သိရသညျ။
ထို့အပွငျ ပွီးခဲ့သညျ့ ရကျပိုငျးက ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ ပဈခတျမှုဖွဈစဉျမြားကွောငျ့ လကျရှိ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ KNU တပျမဟာ ၅ တို့ တဈဖကျနှငျ့တဈဖကျ တပျပိုငျးဆိုငျရာ အဆငျသငျ့နရောယူမှုမြားရှိနသေေးသညျ့အတှကျ ပဈခတျမှုမြားဆကျလကျဖွဈပှား လာမညျကို စိုးရိမျကွောငျးလညျး ဒသေခံ မြားပွောပွခကျြမြားအရသိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/05/knu%e1 %82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1 %80%b9%e1%80%b7
ရခိုငျပွညျနယျ မွပေုံနဲ့ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျတှငျး ရှာနှဈရှာက လူငယျနဲ့ လူလတျပိုငျးအရှယျ အမြိုးသားတှကေို တပျမတျောက ဖမျးဆီးသှားတယျလို့ ဒသေခံတှေ ပွောပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒသေခံတှဟော ရှာမှာမနရေဲဘဲ နီးစပျရာရှာတှကေို ထှကျပွေးနေ ကွတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
မလေ ၉ ရကျ ဒီမနကျ ၄ နာရီလောကျမှာ မွပေုံမွို့နယျ ရရှေငျရှာကို တပျမတျောစဈကွောငျး ဝငျရောကျလာပွီး မနကျ ၆ နာရီ လောကျမှာ ကြေးရှာသား ၇၀ လောကျကို ဖမျးဆီးသှားတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ အသကျ ၁၂ နှဈအထကျ လူငယျတှကေို ဖမျးဆီးပွီး ရရှေငျတောငျပျေါကို တပျရိက်ခာသယျခိုငျးတာလို့ လုံခွုံရေးအရ အမညျမဖျောလိုတဲ့ ရှရှေငျကြေးရှာက ဒသေခံတဈဦးက RFA ကိုပွောပါတယျ။ ဒီအခွအေနကွေောငျ့ တခြို့လညျး ရှာမှာမနရေဲဘဲ နီးစပျရာရှာတှကေို ထှကျပွေး နကွေပွီး၊ အမြိုးသမီးတှနေဲ့ သကျကွီးရှယျအိုတှပေဲ အမြားစုကနျြခဲ့တယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ ကြေးရှာအဝငျမှာ လကျနကျကွီး နှဈခု ရှာအလယျမှာ လကျနကျကွီး တဈခုနဲ့ ရရှေငျတောငျပျေါမှာ လကျနကျကွီး တဈခု စုစုပေါငျး လကျနကျကွီး လေးခု တပျစှဲထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အလားတူ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ဒိုးတနျးရှာဟောငျးက ဒသေခံ ခုနှဈဦးကိုလညျး ဒီနမေ့နကျပိုငျးမှာပဲ တပျမတျောက ဖမျးဆီး သှားတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ အသကျ ၅၀ ဝနျးကငျြးအရှယျတှကေို ဖမျးဆီးသှားတယျလို့ သိရကွောငျး ပုဏ်ဍားကြှနျးမွို့နယျ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးခငျမောငျလတျက ပွောပါတယျ။ အဲဒီကိစ်စတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အနောကျပိုငျးတိုငျး စဈဌာနခြုပျ တိုငျးဦးစီး ဗိုလျမှူးကွီး ဝငျးဇျောဦး ကို RFA က ဆကျသှယျမေးမွနျးပမေယျ့ မရခဲ့ပါဘူး။ တပျမတျော သတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့က ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျး ကတော့ ဒီသတငျးကို မသိရသေးကွောငျး တုံ့ပွနျခဲ့ ပါတယျ RFA က ရရှိတဲ့ အခကျြအလကျတှအေရ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးနဲ့ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျတှမှော ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီ ၂၆ ရကျနကေ့နေ ဧပွီလ ၂၀ ရကျနေ့ တဈလကြျောကာလအတှငျး သဆေုံးတဲ့ အရပျသား ၈၅ ဦးထကျ မနညျးရှိ နပွေီး ထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိသူဟာလညျး ၂၀ဝ ကြျောအထိ ရှိနပေါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/army-arr ested-myaypon-ponnagyun-young-adults-villagers-05092020072757.html
ကခငျြပွညျနယျ၊ ဟူကောငျခြိုမျ့ဝှမျးဒသေ လီဒိုလမျးမပျေါ ဝါရာဇှပျကြေးရှာဒသေခံမြား တောငျးဆိုထားသညျ့ စာကကျြမွကေို တောငျးဆိုမှုအတိုငျး မသတျမှတျပေးနိုငျကွောငျး ဒသေခံမြားကို ကားမိုငျးအုပျခြုပျရေးမှူးရုံးမှ မလေ ၇ ရကျနေ့ အကွောငျးပွနျ ခဲ့သညျဟု သိရသညျ။ ကြေးရှာဒသေခံမြားကိုယျတိုငျ ကြေးရှာစာကကျြမွအေဖွဈ မွဧေက ၃၅၅၀ ကို သတျမှတျပွီး တရားဝငျ အသိအမှတျပွုပေးရနျ နပွေညျတျော ဗဟိုအစိုးရထံသို့ ၃ ကွိမျတိုငျတိုငျ တောငျးဆိုခဲ့ပွီးနောကျ ယခု ပထမအကွိမျ အကွောငျး ပွနျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟု သိရသညျ။
မလေ ၇ ရကျနေ့ ၎င်းငျးတို့ကို ကားမိုငျး အုပျခြုပျရေးမှူး ချေါယူတှဆေုံ့မှုနှငျ့ပတျသကျပွီး ဝါရာဇှပျဒသေခံ ဦးလရှီးအောငျလတျက “ကနြျောတို့ကို မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးက ချေါယူတျယ။ ခငျဗြားတို့ တငျပွထားတဲ့ စာနဲ့ပတျသကျပွီး အထကျက အကွောငျး ပွနျထားတယျ။ အဲ့တော့ အဲ့ဒါကို ဖတျပွတယျ။ ပထမက စားကကျြမွေ သတျမှတျပေးဖို့ တောငျးဆိုထားတဲ့ မွဧေက အရမျး ကယျြတယျ။ အစိုးရက နှား ၇ နှဈကောငျမှာ မွဧေက ၁ ဧကသ သတျမှတျထားတာဖွဈတယျ။ ပွီးရငျ အခုတောငျးဆိုထားတဲ့ နရောတှကေ ကြားထိနျးသိမျးရေးနရောအဖွဈ သတျမှတျထားတဲ့နရောလညျး ပါဝငျနတေယျ။ နောကျ ယုဇန အခှနျဆောငျ ထားတဲ့ မွနေရောလညျး ဖွဈနတေယျ။ အဲ့ကွောငျ့ သီးခွား မွလှေတျတဲ့နရော ပွနျရှာပွီး ထပျမံပွနျတငျပွရနျ လိုတယျဆိုပွီး ပွောခဲ့တယျ”ဟု ပွောသညျ။ ဟူးကောငျးခြိုမျ့ဝှမျးဒသေတှငျ ၂၀ဝ၄ ခုနှဈမှစတငျကာ ကြားထိနျးသိမျးရေးစီမံကိနျး စတငျခဲ့ပွီး နောကျ ၂၀ဝ၇ ခုနှဈတှငျ တဖနျအဆိုပါ စီမံကိနျးအတှငျး နယျမွတေခြို့ကို ယုဇနကုမ်ပဏီထံ ပွနျလညျလုပျကိုငျခှငျ့ပေးခဲ့သဖွငျ့ ဒသေခံမြား၏ လယျယာမွနှေငျ့ စားကကျြမွမြေား ပြောကျဆုံးခဲ့ရသညျဟု ပွောသညျ။ သို့သျောလညျး အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ NLD အစိုးရလကျထကျတှငျ ကြေးရှာစားကကျြမွသေတျမှတျပေးရနျ ဒသေခံမြားကိုယျတိုငျ နိုငျငံတျောသမ်မတရုံးအထိ စာရေးပေးပို့ခဲ့ပွီးနောကျ ယခု ပထမအကွိမျ အကွောငျးပွနျခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျဟု ထပျမံပွောသညျ။
ဟူးကောငျးခြိုမျ့ဝှမျးဒသေ ကြေးရှာ ၂၀ ကြျောတှငျ လှနျခဲ့သညျ ၁၀ နှဈကြျောက မွယောသိမျးပိုကျခံခဲ့ရတာကွောငျ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ သညျ့ မွယောမြားကို ပွနျလညျရရှိရနျ ပွနျလညျကွိုးစားရာ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှစတငျကာ စားကကျြမွေ ခေါငျးစဉျဖွငျ့ မွဧေက ၆ သောငျးကြျောကို စားကကျြမွသေတျမှတျပေးရနျ နပွေညျတျောဗဟိုအစိုးရအဆငျ့အထိ တောငျးဆိုခဲ့သညျ။ ကိုယျပိုငျစားကကျြ မွသေတျမှတျထားသော ကြေးရှာ ၁၃ ခုပွီးပွီး ၎င်းငျးတို့မှာ တရုနျ၊ လဂြားဘှမျ့၊ ပနပျ့၊ အောငျရာ၊ တိနျ့ကောကျ၊ ဝါရာဇှပျ၊ ရှဒူးဇှပျ၊ နောငျးမီ၊ ဒှနျဘနျ၊ လဝါး၊ ဒှမျဘုနျးနှငျ့ လဂေါငျ စသောကြေးရှာမြားဖွဈကွသညျ။ ထိုနရောမြားတှငျ ဒသေခံမြားနှငျ့ ယုဇန ကုမ်ပဏီတို့ကွားမှာလညျး ပဋိပက်ခဖွဈနဆေဲဖွဈသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/05/09/%e1%80%9 d%e1%80%ab%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%
တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA)တို့၏ တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ မွနျမာနှငျ့အိန်ဒိယနှဈနိုငျငံ စာခြုပျခြုပျဆိုကာဆောငျရှကျနသေညျ့ ကုလားတနျ စီမံကိနျး၏ အခွခေံ အဆောကျအအုံမြား သတျမှတျခြိနျအတှငျး အပွီးသတျ မဆောကျနိုငျဘဲ ရပျတနျ့နသေညျဟု သတငျး ရရှိသညျ။
မွနျမာနှငျ့ အိန်ဒိယ၂ နိုငျငံကွား ခြုပျဆိုထားသညျ့ သဘောတူ စာခြုပျအရ ကုလားတနျ စီမံကိနျးကို ၃ နှဈအတှငျးအပွီး တညျ ဆောကျကွမညျဟု ကတိကဝတျပွုထားပွီး စီမံကိနျးကို ၂၀၁၇ ခုနှဈ ဇှနျ ၁ ရကျက စတငျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ စာခြုပျပါ ကတိ ကဝတျအရ ၂၀၂၀ ဇှနျလတှငျ အပွီးသတျ တညျဆောကျပွီးစီးရမညျ ဖွဈသျောလညျး တပျမတျောနှငျ့ AA တို့၏ တိုကျပှဲမြား ကွောငျ့ ကွနျ့ကွာနခွေငျးဖွဈသညျ။ ခငျြးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့မှ စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက “ကုလားတနျ စီမံကိနျးလမျးပိုငျး က ဇှနျမှာ မပွီးနိုငျဘူး။ စာခြုပျ သကျတမျးကလညျး ဇှနျမှာ ကုနျမှာဖွဈလို့ အခု ပွညျထောငျစုအဆငျ့က စာခြုပျ MOU သကျတမျးတိုးဖို့ ပွနျလုပျနပေါတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ကုလားတနျ စီမံကိနျးသညျ အိန်ဒိယ၏ အရှမြေှ့ျော မူဝါဒအရ ကုနျးတှငျးပိတျဖွဈနသေညျ့ အိန်ဒိယ အရှမွေ့ောကျ ပွညျနယျကို ပငျလယျထှကျပေါကျ ရရနျ၊ ဒသေတှငျး ကုနျပစ်စညျးမြားကို အရှတေ့ောငျ အာရှဒသေသို့ ဖွနျ့ကကျြ ခြိတျဆကျနိုငျရနျ ရညျရှယျကာ ဆောငျရှကျနခွေငျး ဖွဈသညျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံ၏ အခွားပွညျနယျမြားနှငျ့ အရှမွေ့ောကျ ပွညျနယျသညျ ဒသေတှငျး အခငျြး ခငျြးဆကျသှယျရနျအတှကျ ကွားတှငျ နိုငျငံရေးအရ မပွလေညျသညျ့ ပါကစ်စတနျနှငျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံတို့ကွားမှ ဖွတျ သနျးသှားရမညျ့ ကဉျြးမွောငျးသညျ့ လမျးသှယျတခုသာ ရှိသညျ။ ယခုအခါ စီမံကိနျးတှငျး ပါဝငျသညျ့ စဈတှေ ဆိပျကမျး၊ ပလကျဝ ဆိပျကမျး၊ ပလကျဝ မွဈကူးတံတားတို့မှာ ပွီးစီးနပွေီဖွဈပွီး အိန်ဒိယနိုငျငံနယျစပျမှ ပလကျဝမွို့သို့ ဖောကျမညျ့ ကား လမျးမှာ တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ မပွီးမစီး ဖွဈနခွေငျး ဖွဈသညျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ မီဇိုရမျပွညျနယျ၊ အိုကျဇောမှ ပလကျဝမွို့အထိ ဖောကျမညျ့ ကားလမျးတှငျ အိန်ဒိယဘကျမှ ၎င်းငျးတို့ နိုငျငံတှငျးလမျးကို ဖောကျနပွေီဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံဘကျခွမျး၊ ပလကျဝမွို့နယျ အတှငျးမှာ တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ နယျမွေ မအေးခမျြးသဖွငျ့ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့သာ လမျးဖောကျလုပျ နိုငျသေးသညျဟု ဦးစိုးထကျက ပွောသညျ။
AA စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျ ထှနျးမွတျနိုငျက ကုလားတနျစီမံကိနျး တညျဆောကျနသေညျ့ ဒသေတကွောမှာ ၎င်းငျး၏ တပျဖှဲ့မြား လှုပျရှားသညျ့ နရောဖွဈသဖွငျ့ AA ၏ သွဇာအာဏာ သကျရောကျမှုကို အိန်ဒိယက အသိအမှတျပွုရမညျ ဟု ၂၀၁၉ ခုနှဈ အတှငျးက ပွောဆိုထားသညျ။ အိန်ဒိယက AA ကို အသိအမှတျပွုရနျလိုပွီး ညှိနှိုငျးမှသာ စီမံကိနျးအောငျမွငျမညျဟု ပွောသညျ့ အပွငျ စီမံကိနျးစတငျလညျပတျပါက လမျးကွောငျးတလြှောကျ ဖွတျသနျးကာ ကုနျသှယျကွမညျ့ အိန်ဒိယ ကုမ်ပဏီမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးမှ စီးပှားရေးသမားမြားက AA ကို ငှကွေေး အခှနျပေးဆောငျရမညျဟုလညျး ၂၀၁၉ ခုနှဈ အတှငျးက ဧရာဝတီကို ပွောဆိုထားသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/09/222271.html
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကြောကျတျောမွို့နယျ တောငျဘှယျကြေးရှာအတှငျး မလေ ၈ ရကျနေ့ ညနေ က လကျနကျကွီး ကရြောကျ ပေါကျကှဲသဖွငျ့ မူလတနျးပွ ဆရာ ၁ ဦးနှငျ့ မိနျးကလေးငယျ ၁ ဦး ထိခိုကျဒဏျရာမြား ရရှိခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ အဆိုပါ ဒဏျရာရရှိသူမြားမှာ မူလတနျးပွဆရာ အသကျ ၂၇ နှဈအရှယျ ဦးစိုးသိနျးနှငျ့ အသကျ ၁၁ နှဈအရှယျ ၆ တနျး ကြောငျးသူ မသျော တာဖွိုး တို့ ဖွဈကွောငျး ကာယကံရှငျ မိသားစုဝငျမြားက ပွောသညျ။ ဒဏျရာရရှိသူ ဦးစိုးသိနျး၏ ဖခငျ ဦးစံသိနျး က “လကျန ကျကွီးက လူတှေ အိပျနကွေတဲ့ အခြိနျလာကတြာပါ။ ပထမ ကနြျောအိမျအနား ဝနျးကငျြကို ၁ လုံးလာကတြယျ။ အဲဒီ အခြိနျ ကနြျောသားက ကွောကျပွီး အိမျပျေါကနေ အိမျအောကျကို ဆငျးပွီးတော့ သှားပုနျးဖို့ သှားတဲ့အခါ နောကျထပျ တလုံး လာကပြွီးတော့ ထိမှနျတာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
တောငျဘှယျကြေးရှာနေ ဦးအောငျသနျးဝငျး က “ကနြျောတို့ ရှာ အရှဘေ့ကျကမျး မြောကျတောငျ ကြေးရှာအနီး ဘုရား တောငျကုနျးပျေါမှာ တပျစှဲထားတာရှိတယျ။ အရငျနတှေ့ကေလညျး အဲဒီနရောက နတေို့ငျး ပဈနတော ရှိတယျ။ သူတို့(တပျ) က ဘယျဖကျကို လှညျ့ပွီးတော့ ပဈတယျဆိုတာတော့ ကနြျောတို့လညျး မသိဘူး။ မနကေ့ ကနြျောရှာထဲကို လကျနကျကွီး လာကတြယျ။ ရှာထဲမှာရော ၊ မွဈကမျးဘေးရော လကျ နကျကွီး ၄ လုံးလောကျ လာကတြာ ရှိတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွော သညျ။ ထိုဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျပွီး တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ ပွောခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျ ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျး က “အဓိက ပွောခငျြတာကတော့ တိုကျပှဲတှေ ဖွဈပွီဆိုရငျ တပျမတျောက လကျနကျကွီးနဲ့ ပဈတယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြတှကေို AA နဲ့ AA အမာခံတှကေ အစဉျတစိုကျ လုပျနတောဖွဈတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ တိုကျပှဲ ဖွဈပှားမဖွဈပှား မသိသေးဘူး။ သူတို့ ရဲ့စှပျစှဲခကျြကတော့ အမွဲတမျး လကျနကျကွီးကတြယျ ဆိုတာလုပျတယျ” ဟု ဧရာဝတီသို့ပွောသညျ။
မိုငျးပေါကျကှဲမှု အပါအဝငျ လကျနကျကွီး ၊ လကျနကျငယျမြား ထိမှနျ၍ အရပျသားပွညျ သူမြားမှာလညျး နစေ့ဉျနှငျ့မြှ သဆေုံး၊ ဒဏျရာ ရရှိနမှေုနှငျ့ အတူ အရပျသားမြား ဖမျးဆီးခံရခွငျး၊ နအေိမျမြား မီးရှို့ခံရမှုမြားလညျးမြားပွား လာနသေညျ့အတှကျ အရပျသား အစိုးရလကျထကျတှငျ အပွငျးထနျဆုံးနှငျ့ ထိခိုကျမှုအမြားဆုံး တိုကျပှဲလညျးဖွဈသညျ။ https://burma.irraw addy.com/category/news
သြှမျးပွညျ အရှပေို့ငျး တာခြီလိတျခရိုငျတှငျ တပတျအတှငျး ကပျြသိနျး ၄၀ဝဝ ခနျ့ရှိသညျ့ မူးယဈဆေးဝါးကို သိမျးဆညျးရမိ ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ တာခြီလိတျမွို့နယျတှငျ အမြားဆုံးဖမျးဆီးရမိခွငျးဖွဈပွီး၊ ကနျြရှိမူးယဈဆေးမြားမှာ မိုငျးယောငျးမွို့ နှငျ့ မိုငျးဖွတျမွို့တို့တှငျ ဖမျးဆီးရမိခွငျးဖွဈသညျ။
မလေ ၇ ရကျ နလေ့ညျ ၁နာရီ က တာခြီလိတျမွို့နယျ မိုငျးဆတျ-တာခြီလိတျကားလမျးပျေါတှငျ အသကျ ၂၁ နှဈ အရှယျ လီဗု မောငျးနှငျပွီး၊ အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျ လျောညီး လိုကျပါးစီးနငျးလာသညျ့ ကားပျေါတှငျစဈဆေးရာ ကပျြသိနျး ၃ ထောငျ တနျဖိုးရှိ စိတျကွှဆေးပွားမြားကို သိမျးဆညျးရမိကွောငျး မူးယဈ ရဲတပျဖှဲ့ ထုတျပွနျခကျြ အရသိရသညျ။ ဖမျးဆီးရမိသညျ့ မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့အတူ ယာဉျမောငျး လီဗု နှငျ့ လိုကျပါစီးနငျးသညျ့ လျောညီးတို့ကို တာခြီလိတျမွို့မရဲစခနျးက မူးယဈဆေးဝါး နှငျ့ စိတျကို ပွောငျးလဲစသေော ဆေးဝါးမြားဆိုငျရာ ဥပဒဖွေငျ့ အမှုဖှငျ့ အရေးယူပွီး ကှငျးဆကျမြားဖျောထုတျစဈဆေးလကျြရှိ ကွောငျး သိရသညျ။
ထို့ပွငျ မလေ ၅ ရကျက မိုငျးယောငျးမွို့၊ မိုငျးယောငျး-မိုငျးဖွတျ သှားလမျးတှငျ လမျးလြှောကျလာသူအသကျ ၁၉ နှဈ အရှယျ မနာဘို အား မသင်ျကာသဖွငျ့ စဈဆေးရာ ၎င်းငျးကိုငျဆောငျလာသညျ့အိတျအတှငျး ကပျြသိနျး ၄၅၀ တနျဖိုးရှိ စိတျကွှဆေးမြားကို သိမျးဆညျးရမိကွောငျးရဲထုတျပွနျခကျြတှငျဖျောပွထားသညျ။ ဆကျလကျပွီး ကှငျးဆကျကို စဈဆေးရာ မိုငျးယောငျးမွို့နယျ ရပျကှကျ (၁) နေ အိုကျပေး ထံ ယူလာသညျကို သိရသဖွငျ့ အိုကျပေး အိမျကို ဝငျရောကျရှာဖှရော အိမျရှတှေ့ငျ ရပျထားသညျ့ ကားပျေါတှငျ ကပျြသိနျး ၂၇၀ တနျဖိုးရှိ မူးယဈဆေးဝါးကို ဆကျလကျ သိမျးဆညျးရမိသညျ။ ထိုနညျးတူ မေ ၄ ရကျ တှငျလညျး သြှမျးပွညျ အရှပေို့ငျး မိုငျးဖွတျမွို့နယျ မိုငျးဖွတျ-ကြိုငျးတုံ သှားကားလမျးပျေါတှငျ လမျးလြှောကျနသေညျ့ အမြိုးသား ၂ ဦးကို မသင်ျကာသဖွငျ့ စဈဆေးရာ ခရီးဆောငျအိတျထဲတှငျ ဘိနျးစိမျး အလေးခြိနျ ၂၇ ကီလို (ဒသေ ကာလပေါကျဈေး တနျဖိုးငှကေပျြ ၂၇၀) ကိုသိမျးဆညျးရကွောငျး သိရပါသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16461
ဒီမိုကရစေီ အကြိုးပွု ကရငျ့တပျမတျော (DKBA) တပျဖှဲ့ဝငျမြားအနဖွေငျ့ မညျသညျ့ အကွောငျးကွောငျ့ဖွဈစေ ခရီးသှားမညျ ဆိုပါက သကျဆိုငျရာ ဆကျဆံရေးရုံးမြားသို့ သတငျးပို့ပွီး သှားလာရနျ မေ ၁၁ ရကျနတှေ့ငျ DKBA ဗဟို ဌာနခြုပျ (ဆုံဆညျး မွိုငျ)က အမိနျ့ထုတျပွနျလိုကျသညျ။
အဆိုပါ အမိနျ့ထုတျပွနျခကျြသညျ အခွားအကွောငျးအရာမြား မပါဝငျဘဲ တပျဖှဲ့ဝငျမြားကို ပွနျလညျ ကွပျမတျ လိုသညျ့ သဘောသာ ဖွဈသညျဟု DKBA မှ ဗိုလျမှူးကွီးကြျောသနျးဌေးက ကအေိုငျစီသို့ ယခုလို ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “ ဒီလိုစညျးကမျး က အရငျကတညျးကထုတျထားပွီးသား။ တခြို့က စညျးကမျးလိုကျနာတာရှိတယျ၊ မလိုကျနာတာရှိတယျ။ အမြိုးမြိုးပေါ့။ ဒါက စညျးကမျးပွနျတငျးကွပျပွီး စနဈတကဖြွဈအောငျ ပွနျထိနျး ညှိတဲ့သဘောပါ”ဟု ပွောသညျ။ အဆိုပါ အမိနျ့ထုတျပွနျခကျြတှငျ DKBA စဈဗြူဟာမြား၊ ဌာနမြား၊ တပျရငျးမြား၊ တပျဖှဲ့ဝငျမြား စဈကွောငျးမြား အားလုံးပါဝငျပွီး ခှငျ့နှငျ့ဖွဈစေ တာဝနျအရဖွဈစေ၊ အရေးပျေါကိစ်စကွောငျ့ဖွဈစေ မညျသူမဆို ခရီးသှားမညျဆိုပါက သတငျးပို့ရမညျဖွဈကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။
အဆိုပါထုတျပွနျခကျြသညျ ဒီမိုကရစေီ အကြိုးပွုကရငျ့တပျမတျော (DKBA ) ကလိုထူးဘောတပျဖှဲ့ စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျကွီး စောမိုရှေးက လကျမှတျထိုးထုတျပွနျခွငျးဖွဈပွီး အမိနျ့စာကို လိုကျနာခွငျးမရှိပါက တပျဖှဲ့မှ သတျမှတျထားသညျ့ စညျးကမျး ခကျြအတိုငျး ထိရောကျစှာ အပွဈပေး ခွငျးခံရမညျဖွဈသညျဟု အမိနျ့စာတှငျဖျောပွထားသညျ။ ဒီမိုကရစေီအကြိုးပွု ကရငျ့ တပျမတျောအဖှဲ့သညျ KNU -ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး မှ ၁၉၉၄ ခုနှဈတှငျ စတငျခှဲထှကျခဲ့ပွီးနောကျ တိုးတကျသော ဗုဒ်ဓ ဘာသာ ကရငျအမြိုးသား တပျမတျော -DKBA အဖွဈ ရပျတညျခဲ့ ရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှဈ၊ ဧပွီလတှငျ ဒီမိုကရစေီ အကြိုးပွု ကရငျ တပျမတျော(DKBA) အဖွဈ နာမညျပွောငျးလဲခဲ့သညျ။
၂၀၁၅ခုနှဈတှငျ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေးသဘောတူ စာခြုပျ -NCA လကျမှတျထိုးထားသညျ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့တဈဖှဲ့ဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/05/dkba%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b% e1%80%96%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%82%94%e1
ရခိုငျပွညျနယျ၊ တောငျကုတျမွို့ပျေါတှငျ နထေိုငျသူ နိုငျငံရေးပါတီဝငျ ၁ ဦးနှငျ့ အရပျဘကျ လူမှုအဖှဲ့အစညျးမှ မွို့ခံ ၃ ဦး ကို ရဲတပျဖှဲ့က အကွမျးဖကျ တိုကျဖကျြရေး ဥပဒေ ပုဒျမ ၅၀ (က) ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ကာ ဖမျးဆီး စဈဆေးခံနရေကွောငျး သတငျး ရရှိ သညျ။ အဆိုပါ အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေး ဥပဒဖွေငျ့ အမှုဖှငျ့ခံထားရသူမြားမှာ တောငျကုတျမွို့နယျ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (ANP) မှ မွို့နယျ အလုပျအမှုဆောငျ ကျောမတီဝငျ ဦးဝသေောငျး၊ မွို့နယျစညျပငျယာရေးကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဇယေကြျောနှငျ့ စညျပငျကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ (ဟောငျး) ဦးစနျးငှတေို့ ဖွဈကွောငျး မိသားစုဝငျမြားက ပွောသညျ။
ဖမျးဆီးခံ ဦးဇယေကြျော၏ ဇနီး ဒျေါဟနျစုလှိုငျ က “ဒီနေ့ တရားရုံးမှာ ရုံးထုတျပွီး ကမြ အမြိုးသားနဲ့ အဖမျးခံထားရတဲ့ လူတှေ ကို ရမနျယူပါတယျ။ အကွမျးဖကျဥပဒနေဲ့ အမှုဖှငျ့ခံထားရတယျလို့တော့ ကမြအမြိုးသားက ပွောသှားတယျ။ ဘာကွောငျ့ ဖမျးတယျဆိုတာလညျး ကမြတို့လညျး တိတိကကြ မသိဘူး။ အခုလို ဖွဈတဲ့အပျေါ အရမျးလညျး စိတျမကောငျး ဖွဈနရေတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ အဆိုပါ ဖမျးဆီးခံ တောငျကုတျမွို့ခံ ၃ ဦးကို မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့ကနေ ယနေ့ တောငျကုတျမွို့နယျ တရားရုံးတှငျ ရုံးထုတျပွီး မလေ ၂၃ ရကျနအေ့ထိ ရမနျကွီး ၂ ပတျယူခဲ့ကွောငျးလညျး သိရသညျ။
တောငျကုတျမွို့နယျ ANP ပါတီမှ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဦးဖကွှေယျ က “ကနြျောတို့ ပါတီက ဦးဝသေောငျး အဖမျးခံရတယျဆိုတာတော့ ဟုတျပါတယျ။ သူတို့ကို အကွမျးဖကျမှု ဥပဒနေဲ့ အမှုဖှငျ့ပွီးတော့ ဒီနခြေု့ပျရမနျယူသှားတာရှိတယျ။ အခုအခြိနျ အခွအေနကေ တအားရှုပျထှေးနတေော့ ဒီဖွဈစဉျအပျေါမှာ ကနြျောတို့လညျး ဘယျလိုပွောရမှနျးတောငျမသိတော့ပါဘူး။ ဘာ့ကွောငျ့ ဖမျး တယျဆိုတာလညျး ကနြျောတို့အနနေဲ့ သခြော မသိရသေးဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ ရဲမှူး သိနျးနိုငျ က “ကနြျောတို့က ရမနျယူပွီးတော့ စုံစမျး စဈဆေးနတေဲ့ ကာလမို့ အသေးစိတျအခကျြအလကျကိုတော့ ပွောလို့ မရဘူး။ သတငျးတခြို့ရရှိထားတဲ့အတှကျ အဲဒီအပျေါမှာ အခွခေံပွီးတော့ ကနြျောတို့က စုံစမျးစဈဆေးမှုတှေ လုပျနခွေငျးသာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလောကျပဲ လောလောဆယျ ပွောလို့ ရမယျ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေးဥပဒဖွေငျ့ အဆိုပါ ဖမျးဆီးစဈဆေးခံနရေသူမြားတှငျ ဦးဇယေကြျောမှာ မလေ ၉ ရကျနကေ့ လညျး ကောငျး၊ မလေ ၁၀ ရကျနတှေ့ငျ ဦးစနျးငှေ အားလညျးကောငျး၊ ယနေ့ မလေ ၁၁ ရကျနတှေ့ငျ ဦးဝသေောငျးအား လညျးကောငျး စုံစမျးမေးမွနျးစရာမြားရှိသညျဟုဆိုကာ ရဲတပျဖှဲ့က နအေိမျသို့ လာရောကျချေါယူသှားခွငျးဖွဈကွောငျး မိသားစု ဝငျမြားက ပွော သညျ။ လကျရှိအခြိနျတှငျ တောငျကုတျမွို့နယျအတှငျး နိုငျငံရေးပါတီမြားအကွားတှငျ ရှုပျထှေးမှုမြား ဖွဈပျေါ နသေညျ့အတှကျ မွို့လုံခွုံရေးကို တငျးကွပျထားကွောငျးလညျး ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။ https://burma.irrawaddy.c om/news/2020/0 5/11/222380.html
၁၅။ မညျသညျ့အဖှဲ့အစညျးကိုမှခနျြလှပျမထားဘဲ တပျမတျောအနဖွေငျ့ တဈနိုငျငံလုံးအပဈရပျစဲပေးသငျ့ကွောငျး မှနျပွညျသဈ ပါတီ ဥက်ကဌတိုကျတှနျး
တပျမတျော၏ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးနှငျ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ထုတျပွနျခကျြကို ကောငျးမှနျသော ဆောငျရှကျ ခကျြဟု မိမိတို့ရှုမွငျသလို တပျမတျောအနဖွေငျ့ သဘောထားကွီးစှာထား၍ တဈနိုငျငံလုံးအပဈအခတျရပျစဲရေး ကွငွောပေး သငျ့ကွောငျး မှနျပွညျသဈပါတီဥက်ကဌ နိုငျဟံသာ တိုကျတှနျးလိုကျသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ COVID-19 ရောဂါထိနျးခြုပျ၊ ကာကှယျ၊ ကုသရေးလုပျငနျးမြား ပိုမိုထိရောကျ လငျြမွနျကယျြပွနျ့စှာဆောငျရှကျနိုငျရေးနှငျ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ တပျမတျောအနဖွေငျ့ နိုငျငံတကာ စံနှုနျးအတိုငျး နိုငျငံတျောမှအကွမျးဖကျဟု သတျမှတျကွညောထားသော အကွမျးဖကျအဖှဲ့ အစညျးမြားရှိသညျ့ နရောမြားမှအပ ကနျြနယျမွမြေား၌ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ မလေ(၁၀) ရကျမှ သွဂုတျလ (၃၁) ရကျနအေ့ထိ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲထားကွောငျး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးက ကွညောခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
နိုငျဟံသာက “ဒီကပျရောဂါက အန်တရယျတျောတျောကွီးမားပါတယျ၊ အားလုံးအတူတကှဝိုငျးဝနျးကာကှယျကွမှ ဖွဈမယျ၊ ဒါပမေယျ့ တိုကျပှဲတှဆေကျဖွဈနရေငျတော့ ရောဂါကာကှယျရေးအပိုငျးတှမှော အခကျအခဲဖွဈနပေါလိမျ့မယျ၊ နရောတိုငျးအား လုံးမှာ ပဈခတျတိုကျခိုကျတာတှကေို ရပျစဲထားသငျ့တယျ၊ အခြို့အဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ရပျစဲပွီး အခြို့အဖှဲ့အစညျးနဲ့ တိုကျပှဲ ဆကျဖွဈနတောကတော့ မဖွဈသငျ့ဘူးလေ၊ ဒါကွောငျ့ တပျမတျောအနနေဲ့ သဘောထားကွီးကွီးထားပွီး တဈနိုငျငံလုံး အပဈ အခတျရပျစဲပေးပါလို့ တိုကျတှနျးပါတယျ”ဟု မှနျသတငျးအဂေငျြစီသို့ ပွောသညျ။ မွနျမာ့မဟာဗြိူဟာနှငျ့ မူဝါဒလလေ့ာ ရေးအငျစတီကြူ ISP-Myanmar ဒါရိုကျတာ ဦးအောငျသူငွိမျးက “ကမ်ဘာ့စီးပှားရေး ထိခိုကျလာတဲ့အနအေထားမှာ ဒီလို အရငျး အမွဈတှေ ရှားပါးလာတဲ့အနေ အထားမှာလညျး တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးတှေ ဒီလို အခှနျငှကေောကျတာ ကစ လို့ အရငျးမွဈတှေ ရှားပါးလာနိုငျတဲ့ပွဿနာမြိုးရှိတယျ၊ အဲလိုအရငျးမွဈတှရှေားပါးလာရငျ လူသားတှမှော လုယကျ တတျတဲ့ သဘောရှိတယျခငျဗြ၊ အခငျြးခငျြးလညျး ပွဿနာပဋိပက်ခ ပိုကွီးလာနိုငျတဲ့အနအေထားမြိုးလညျး ရှိတတျတယျ၊
သို့ရာတှငျ ယငျးကဲ့သို့ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး ကွညောထားသညျ့ကာလအတှငျး တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့ အစညျးမြားအားလုံးအနဖွေငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ၏ ငွိမျးခမျြးရေးမူဝါဒ(၆) ရပျအနကျမှ ဖျောပွပါ(၄)ခကျြဖွဈ သညျ့ (က) သဘောတူစာခြုပျမြားအတိုငျးကတိတညျရနျ။ (ခ ) ငွိမျးခမျြးရေးသဘောတူညီခကျြမြားအပျေါ အမွတျမထုတျရနျ။ (ဂ ) ဒသေခံပွညျသူမြားအပျေါ ဝနျထုပျဝနျပိုးမဖွဈစရေနျ။ (ဃ) နိုငျငံတျောက ထုတျပွနျထားသညျ့ တညျဆဲဥပဒမြေားကို အလေးအနကျထား လိုကျနာရနျလိုအပျကွောငျး တပျမတျော၏ကွငွောခကျြတှငျ ဖျောပွသညျ။ ထို့အပွငျ နိုငျငံတျောအစိုးရ၏ အုပျခြုပျမှု ယန်တရားအဆငျ့ဆငျ့၊ လမျးပနျးဆကျသှယျမှု လုံခွုံခြောမှစေ့ရေေး၊ ပွညျသူလူထု၏ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျနှငျ့ အကြိုးစီးပှားမြားကို ထိခိုကျမှုမဖွဈစရေနျ တာဝနျယူ ရမညျဖွဈပွီး အထကျပါ ဖွဈစဉျဖွဈရပျမြား ဖွဈပျေါလာပါက တပျမတျော အနဖွေငျ့ လိုအပျသလို အရေးယူဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး သတိပေးထားသညျ။ http://burmese.monnews.or g/2020/05/11/%e1%80%99%e1%80%8a% e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80
မွဈကွီးနားမွို့ရှိ Covid-19 ရောဂါကွောငျ့ FQ ဝငျနသေူမြားကို ပရဟိတအဖှဲ့မှ အစားအသောကျထောကျပံ့နမှေုကို မလေ ၁၁ ရကျနမှေ့စကာ ခတ်ေတရပျနားထားမညျဖွဈကွောငျး Covid-19 ကူညီပေးရေး မွဈကွီးနားအခွပွေု ပရဟိတအဖှဲ့မှ စာရငျးစဈ အထကျတနျးရှနေ့ေ ဦးခှနျမွတျမငျးအောငျ က ပွောသညျ။
“ကနြျောတို့အဖှဲ့က အဖှဲ့ငယျလေးတဈဖှဲ့ဖွဈတယျ။ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျတှေ ပံ့ပိုးပေးနတေဲ့ ငှနေဲ့ ကွားခံကူညီနတေဲ့အဖှဲ့ ဖွဈတယျ။ အဲတော့ ကနြျောတိုပမှာရှိတဲ့ငှနေဲ့ တောကျလြှောကျသုံးမယျဆိုလို့ရှိရငျ တဈလ လောကျဘဲ သူတို့ကို ပံ့ပိုးနိုငျမယျ။ ဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့ကနပွေီး အစိုးရကို အကူအညီတောငျးကွညျ့တယျ။ အစိုးရကနပွေီးမှ သူတို့အနနေဲ့ ၅ လပိုငျး ၁ ရကျနေ့ ကနစေပွီး တဈလလုံးသူတို့အနနေဲ့ တာဝနျယူမယျလို့ အဲနကေ့ပွောခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့အခုနောကျပိုငျးကတြော့ ၁၁ ရကျနမှေ့ ဘဲ စကြှေးမယျလို့ထပျပွောတယျ။ နောကျဆုံးကွားတဲ့သတငျးအရဆိုရငျ မကြှေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ သတငျးပွနျရတယျ။ အဲ့ကွောငျ့ ကနြျောတို့အနနေဲ့ ၁၀ ရကျနောကျပိုငျး အားလုံးရပျထားမယျဆိုပွီး အားလုံးဆန်ဒအတိုငျး သဘောတူဆုံးဖွတျထားခွငျးဖွဈတယျ”ဟု ဦးခှနျမွတျမငျးအောငျ ကဆိုသညျ။
လကုနျတဲ့ထိကြှေးနိုငျမယျ့ အလှူရှငျရှိပါတယျ။ Q ထားတဲ့သူတှကေို လ ကုနျတဲ့ထိက ကနြျောတို့အစိုးရအဖှဲ့က ကြှေးစရာပိုကျ ဆံ ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ သို့သျောနောကျပိုငျးဝငျလာလို့ နောကျပိုငျးထားရမယျ့သူတှအေတှကျ အလှူရှငျမရှိရငျတော့ ကနြျော တို့ ကြှေးမှာဖွဈတယျ။ မကြှေးတာမဟုတျဘူး။ ကြှေးရဲ့သားနဲ့ အလှူရှငျ သူတို့တာဝနျယူမှာဖွဈတယျ။ ကုသိုလျယူမယျဆိုရငျ တော့ ကနြျောတို့က မငွငျးနိုငျဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဒီနေ့ နောကျထပျအလှူရှငျ ၃ ဦး ပျေါလာတယျ သူတို့ကြှေးမှာဖွဈတယျ။ လကုနျ နောကျပိုငျး အလှူရှငျမရှိရငျတော့ အစိုးရအဖှဲ့ အနနေဲ့ ကြှေးမှာဖွဈတယျ။ ဟု ကခငျြပွညျနယျ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးဇျောဇျောက ပွောသညျ။
လကျရှိ ကခငျြပွညျနယျ၊ မွဈကွီးနားမွို့ပျေါတှငျ အစိုးရကသတျမှတျထားသညျ့ FQ Center မြားသညျ ပညာရေး ကောလိပျ၊ သားဖှားသငျတနျးကြောငျး၊ သူနာပွုကြောငျး၊ မွဈကွီးနားတက်ကသိုလျ စုစုပေါငျး ၄ နရော သတျမှတျထားပွီး Q ဝငျနသေူ စုစု ပေါငျး ၂၅၀ ကြျောရှိကွောငျး သကျဆိုငျရာမှ သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/05/0 8/%e1%80% 99%e1%80%bc%e1%80%85%e1%80%ba%e1
အစိုးရ၏ Covid-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးဆိုငျရာ ညှနှိုငျးပူးပေါငျးရေးကျောတီနှငျ့ ကရငျအမြိုးသား အစညျးအရုံး KNU တို့ သညျ မလေ ၁၁ ရကျတှငျ ကရငျပွညျနယျဖာပှနျခရိုငျနှငျ့ သထုံခရိုငျရှိ စဈရေးတငျးမာ မှုကိစ်စမြား ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ဆှေးနှေးပှဲကို ညှိနှိုငျးပူးပေါငျးရေးကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာ တငျမြိုးဝငျး က အစိုးရကိုယျ စားလှယျဘကျမှ ဦးဆောငျပွီး KNU ဘကျမှ KNU အထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျ ပဒိုစောတာဒိုမှူးက ဦးဆောငျကာ အှနျလိုငျးရုပျသံ (Online Video Conferencing) ပုံစံဖွငျ့ ဆှေးနှေးကွခွငျးဖွဈသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ မလေ ၆ ရကျက ကရငျပွညျနယျ၊ ဖာပှနျခရိုငျ ၊ ဒှဲလုံမွို့နယျတှငျ တပျမတျောနှငျ့ KNU တပျမဟာ (၅) တို့ အကွား အပွနျအလှနျ ပဈခတျမှု ဖွဈပှားခဲ့ပွီး ဧပွီလ ၃၀ ရကျကလညျး မှနျပွညျနယျ၊ သထုံခရိုငျရှိ KNU တပျမဟာ (၁) စဈဆေးရေး ဂိတျကို ဖယျရှားပေးရနျ တပျမတျောဘကျက လာရောကျတားမွဈရာမှ စဈရေးတငျးမာမှု ဖွဈပှားခဲ့သညျ။ ပဒိုစောတာဒိုမှူးက “အထူးသဖွငျ့ နားလညျမှုလှဲမှားနိုငျလောကျတဲ့ နရောတှမှောရှိတဲ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးတဲ့ စခနျးတှကေို နှဈဖကျကွားမှာ ကွိုတငျအသိပေးပွီး ဘယျလိုပုံစံမြိုးနဲ့ ညှိနှိုငျးမလဲဆိုတဲ့ မူတခုခမြှတျပွီး ကျောမတီနဲ့ ညှိနှိုငျးသှားဖို့ပါ။ ကနြျောတို့ဘကျက ကိုဗဈ စဈဆေးရေး စခနျးတှရေဲ့စာရငျးကိုပေးမယျ။ အဲဒီပျေါမှာညှိနှိုငျးသှားဖို့ပါ” ဟု ပွောဆိုသညျ။
အစိုးရ၏ COVID-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးဆိုငျရာ EAO မြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးပူးပေါငျးရေးကျောမတီ ဒုတိယ ဥက်ကဋ်ဌ အငွိမျးစား ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး ခငျဇျောဦး ကလညျး KNU နှငျ့ ညှိနှိုငျးပူးပေါငျးရေးကျောမတီတို့၏ ဆှေးနှေးပှဲသညျ အပွုသဘောဆောငျ ပွီး တိုးတကျမှုရှိကွောငျး ပွောဆိုသညျ။ KNU အနနှေငျ့ COVID-19 ကာကှယျရေးဆိုငျရာ စဈဆေးရေးဂိတျမြား ဆောငျရှကျ မညျဆိုပါက မညျသညျ့နရောမြားတှငျ မညျသညျ့ပုံစံဖွငျ့ မညျကဲ့သို့ ဆောငျရှကျမညျကို ကျောမတီထံ တငျပွပွီး ညှိနှိုငျးဆောငျ ရှကျရနျ KNU ဘကျသို့ တောငျးဆိုထားကွောငျး ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
တိုငျးရငျးသားအရေးလလေ့ာသုံးသပျသူ ဦးမောငျမောငျစိုးကမူ KNU အနနှေငျ့ ဗိုငျးရပျဈကာကှယျရေးအတှကျ ဖှငျ့မညျ့ စဈဆေး ရေးဂိတျမြား စာရငျးကို အစိုးရ၏ ညှိနှိုငျးပူးပေါငျးရေးကျောမတီ ထံတငျပွဆောငျရှကျမညျဆိုပါက လတျတလောတှငျ နှဈဖကျ ပဋိပက်ခမြား နညျးသှားနိုငျကွောငျးသုံးသပျသညျ။ သို့သျော တဖကျက စဉျးစားကွညျ့ပါက စဈဆေးရေးဂိတျမြားဖှငျ့ရနျ အစိုးရ၏ ကျောမတီနှငျ့ ညှိနှိုငျးရမညျဆိုသညျ့ အခကျြသညျ အစိုးရက ခှငျ့ပွုမှသာ စဈဆေးရေးဂိတျမြားကို KNU ဘကျက ဖှငျ့ခှငျ့ရှိသညျ့ သဘောဖွဈနကွေောငျး ၎င်းငျးက ထောကျပွသညျ။ ဦးမောငျမောငျစိုးက “အစိုးရသဘောတူလို့ဖှငျ့ရငျ ပွဿနာမရှိဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျပဲ ဖွဈပါတယျ” ဟု မှတျခကျြပေးသညျ။
KNU အဖှဲ့သညျ အစိုးရနှငျ့ တနိုငျငံလုံးပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ (NCA) ကို ၂၀၁၅ ခုနှဈ အောကျတိုဘာ လ တှငျ လကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ အဖှဲ့ဖွဈပွီး အစိုးရနှငျ့ လကျတှဲကာ ဗိုငျးရပျဈကာကှယျရေး ဆောငျရှကျနသေညျ့ အဖှဲ့ အစညျးလညျးဖွဈသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/11/222385.html
မွနျမာနိုငျငံ အပါအဝငျ ကမ်ဘာတဝနျး ကပျရောဂါနဲ့ ကွုံနရေခြိနျမှာ ရောဂါထိနျးခြုပျ ကာကှယျကုသရေး အထောကျအကူ ဖွဈစဖေို့နဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ဒီကနေ့ မလေ ၁၀ ရကျနကေ့စပွီး သွဂုတျလ ၃၁ ရကျနအေ့ထိ တိုကျခိုကျမှုတှေ ရပျစဲမယျ့ အကွောငျး ကာကှ ယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးက မနတေု့နျးကပဲ ကွညောခကျြ ထုတျပွနျခဲ့တာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး အကွမျးဖကျ အဖှဲ့ အစညျးအဖွဈ သတျမှတျကွညောထားတဲ့ လကျနကျကိုငျတှရှေိရာ နယျမွတှေမှော သကျရောကျမှုရှိမှာ မဟုတျကွောငျးလညျး ပွောဆိုထားပါတယျ။ ဒီအတှကျလညျး အစိုးရက အကွမျးဖကျ အဖှဲ့အစညျးအဖွဈ သတျမှတျထားတဲ့ AA ရခိုငျတိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့နဲ့ လတျ တလော တိုကျပှဲတှေ ဖွဈပှားနတေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျတှကေ နယျမွတှေေ ပါဝငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီလို တိုကျပှဲတှေ ပွငျးထနျနတေဲ့ နယျမွတှေေ မပါဝငျဘဲ တဖကျသတျ အပဈရပျ ကွညောတာဟာ လကျတှေ့ အလုပျဖွဈနိုငျပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ နိုငျငံရေးလလေ့ာသုံးသပျသူ ဒေါကျတာရနျမြိုးသိမျးတို့လို အကဲခတျတှကေ မေးခှနျး ထုတျနကွေပါတယျ။
“COVID-19 ဖွဈနခြေိနျမှာရော ကနြျောတို့နိုငျငံရဲ့ ဒီမိုကရစေီ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစု တညျဆောကျရေး လမျးကွောငျးမှာရော ဒီလို အပဈအခတျရပျစဲရေး ကွညောတာကို ကောငျးမှနျတဲ့ ခွလှေမျးတခုလို့ မွငျပါတယျဗြ။ သို့သျောလညျးပဲ ဒီ အပဈအခတျ ရပျစဲရေးဟာ တနိုငျငံလုံးကို လှမျးခွုံတဲ့ အပဈအခတျရပျစဲရေးဖွဈဖို့ လိုအပျတယျလို့ မွငျတယျ။ အဲ့တော့ လကျရှိအခွအေနမှော တကယျတော့ တိုကျပှဲတှေ စဈရေးလှုပျရှားမှုတှေ အမြားဆုံး ဖွဈနတောက ရခိုငျပွညျနယျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျမှာ ဖွဈတဲ့အခါကြ တော့ အဲ့ဒီ့ တိုငျးရငျးဒသေ ၂ ခုကိုပါ လှမျးခွုံတဲ့ အပဈအခတျရပျစဲရေးဖွဈဖို့ လိုအပျတယျလို့ မွငျတယျ။ ရခိုငျအမြိုးသား ကောငျစီ (ANC) အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးထှနျးဇျောကတော့ တပျမတျောရဲ့ တဖကျသတျ ကွညောခကျြ ဟာ နိုငျငံတကာ ဖိအားတှကေို ရှောငျလှဲဖို့ ကွိုးပမျးတဲ့လုပျရပျ အဖွဈနဲ့သာ ရှုမွငျပါတယျ။
“အဲ့သလိုပဲ ပဈနခေတျနေ တိုကျနကွေတဲ့ တိုကျပှဲတှေ ဖွဈနကွေတဲ့ ကာလဒသေတှမှောလညျး အပဈအခတျ ရပျစဲမှုကို ထိထိ ရောကျရောကျ ဖျောဆောငျနိုငျဖို့က အရေးကွီးတယျ။ အထူးသဖွငျ့က အခု စဈရေးပဋိပက်ခတှေ တငျးမာနတေဲ့ ခငျြးနဲ့ ရခိုငျ ပွညျနယျတှငျးက ဒသေခံ ပွညျသူလူထုကွားမှာ အငျမတနျမှ ကွီးမားတဲ့ စဈဘေးဒုက်ခတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ အခွအေနေ ဆိုးကွီးကို ကြျောလှားနိုငျဖို့ဆိုတာ နိုငျငံရေးအရ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့ နှဈဖကျကွား သဘောတူညီခကျြတှရေဖို့ ယုံကွညျမှု နားလညျမှု တညျဆောကျနိုငျဖို့ ဒီအပဈအခတျရပျစဲရေး ကွညောခကျြကို လကျတှဖွေ့ဈအောငျ ဒီအတှကျစပွီး ခွလှေမျးပွငျဖို့ မဖွဈမနေ လိုအပျနပွေီလို့ သုံးသပျပါတယျ။” https://burmese.voanews.com/a/react-myanmar-military-ceasefire/54 13596.html
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ဘူးသီးတောငျမွို့၊ ရပျကှကျ ၄ မှာ မွငှေားရမျးပွီး အထောကျအပံ့ အကူအညီမရဘဲ တဲဆောကျနရေတဲ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျပွညျသူတှနေဲ့ ဘုနျးကွီးကြောငျး အပါအဝငျ နီးစပျရာကြေးရှာတှမှော ခိုလှုံနရေသူတှေ စားရေးသောကျရေးနဲ့ သောကျသုံးရေ အခကျအခဲတှကွေုံနရေပါတယျ။
ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ရပျကှကျ ၄ မှာ အထောကျအပံ့ အကူအညီမရတဲ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျတှနေဲ့ ဘုနျးကွီးကြောငျး အပါ အဝငျ နီးစပျရာကြေးရှာတှမှောခိုလှုံနရေသူတှေ စားဝတျနရေေး အခဲတှကွေုံနရေကွောငျး ခမီခြောငျးကြေးရှာ ဒသေခံ ဦးကြျော သာခိုငျက RFA ကိုပွောပါတယျ။ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးအောငျသောငျးရှကေ ရပျကှကျ ၄ က စဈဘေးဒုက်ခ သညျတှတေငျ အခကျအခဲဖွဈနတော မဟုတျဘဲ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျထဲမှာရှိတဲ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျ တှေ
အားလုံး အခကျအခဲကွုံနရေတယျလို့ ပွောပါတယျ။“လကျရှိ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျထဲက စဈဘေးဒုက်ခသညျစခနျး ၂၀ လောကျမှာရှိတဲ့ လူဦးရေ တဈသောငျးကြျောဟာ အစိုးရရဲ့ အကူအညီအထောကျအပံ့ ပုံမှနျမရတဲ့အတှကျ ပုဂ်ဂိလက အကူ အညီတှပေဲ မြှျောလငျ့နရေတယျလို့ ဦးအောငျသောငျးရှကေ ဆိုပါတယျ။
ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးရှလှေအောငျကတော့ ရပျကှကျ ၄ တငျမကဘဲ တဈမွို့နယျလုံးမှာရှိတဲ့ စဈဘေးရှောငျ တှအေတှကျ နစေ့ဉျစားဖို့ ဆနျအကူအညီပေးထားတယျလို့ RFA ကို ပွောပါတယျ။ REC ရဲ့ လလေ့ာဆနျးစဈခကျြအရ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးမှာ အထောကျအပံ့ အကူအညီမရဘဲ ငှားရမျးနထေိုငျ နရေတဲ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျ အိမျထောငျစုပေါငျး ၃၇၀ဝ ခနျ့ရှိပွီး အစုအဝေးလိုကျ စခနျးဖှငျ့နကွေတာ မဟုတျတဲ့အတှကျ အကူအညီတှေ မရသလောကျပဲလို့ ဆိုပါတယျ။ တပျမတျောနဲ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော AA တို့ရဲ့ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျအတှငျးက စဈဘေးဒုက်ခသညျ စခနျး ၂၀ လောကျနဲ့ နီးစပျရာ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှေ၊ ကြေးရှာတှမှော ရောကျရှိခိုလှုံနရေတဲ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျ အရအေတှကျဟာ ၁၃၀ဝဝ ကြျောရှိပွီလို့ မွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးရှလှေအောငျက ပွောပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/w ar-refugees-in-buthidaung-05102020055932.html
ကခငျြပွညျနယျ၊ ဆှမျပရာဘှမျမွို့အနီးမှာ အငျအားရဈချြတာစကေး ၃ ဒသမ ၈ အဆငျ့ရှိ အငျအားအနညျးငယျရှိတဲ့ မွငေလငျြ တခု လှုပျခတျသှားတယျလို့ မိုးဇလဌာနက ထုတျပွနျပါတယျ။
မလေ ၉ ရကျ ည ၈ နာရီ၊ ၅၇ မိနဈ၊ ၅၇ စက်ကနျ့ အခြိနျက မွဈကွီးနားမွငေလငျြစခနျးရဲ့ မွောကျ-အရှမွေ့ောကျဘကျ ၇၄ မိုငျ လောကျ‌ဝေးတဲ့ မွနျမာနိုငျငံပွညျတှငျး ဆှမျပရာဘှမျမွို့ရဲ့ အရှမွေ့ောကျဘကျ ၅ မိုငျခနျ့အကှာ မွောကျလတ်တီတှဒျ ၂၆ ဒသမ ၅၈ ဒီဂရီ၊ အရှလေ့ောငျဂြီတှဒျ ၉၇ ဒသမ ၆၃ ဒီဂရီ၊ အနကျ ၄၇ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပွုပွီး မွငေလငျြတခု လှုပျသှားတာလို့ သတငျးထုတျပွနျခကျြမှာ ဖျောပွပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/387010
၂၁။ သံဖွူဇရပျမွို့နယျတှငျ မူးယဈဆေးဝါးဝယျယူသူ ၃၇ ဦးကို KNU ဖမျးဆီး၊ လူတဈဦး ၅ သိနျးနှငျ့ ဆိုငျကယျတဈစီး ၅ သိနျး စီဒဏျ ငှခေမြှတျ
သံဖွူဇရပျမွို့နယျ၊ ရဲတံခှနျကြေးရှာနှငျ့ စခနျးကွီးကြေးရှာအကွား အတှငျးစခနျးကွီးကြေးရှာရှိ ခွံတဈခွံ၌ မလေ ၇ ရကျနေ့ ညပိုငျးက မူးယဈဆေးဝါးလာရောကျဝယျယူသူ ၃၇ ဦးကို ကရငျ့အမြိုးသားရဲတပျဖှဲ့ KNPF က ဖမျးဆီးပွီး လူတဈဦးငှကေပျြ ၅ သိနျးနှငျ့ ဆိုငျကယျတဈစီး ၅ သိနျး ဒဏျငှခေမြှတျထားကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။
အဆိုပါ မူးယဈသုံးစှဲသူတဈဦးကို ၆ လစာဖွငျ့ညီမြှသညျ့ ငှဒေဏျ ၅၀ဝ,ဝဝဝ ကပျြနှငျ့ ဆိုငျကယျတဈစီးအတှကျ ၆ လစာ ဖွငျ့ ညီမြှသညျ့ငှဒေဏျ ၅၀ဝ,ဝဝဝ ကပျြ ဒဏျငှပေေးဆောငျရမညျဖွဈကွောငျး ဒုရဲတပျဖှဲ့မှူး စောငွိမျးခမျြး အမှတျ(၄)ရဲဌာန KNPF, ဝငျးရေးမွို့နယျ ဆိုသူက အမိနျ့ခမြှတျထားသညျ့ မိတ်တူစာတဈစောငျ မှနျသတငျးအဂေငျြစီက လကျခံရရှိထားသညျ။“ဖားပွ ရှာမှာ သှားရှေးရတာပါ၊ ရှာစုံက မှနျလူငယျတှခေညျြးပဲ အဖမျးခံထိတာ၊ လှတျတဲ့လူက လှတျလာပွီ၊ လာမရှေးသေးတဲ့လူတှေ ကနျြသေးတယျ” ဟု ဒဏျငှသှေားရောကျပေးဆောငျခဲ့သူ အမညျမဖျောလိုသညျ့ ဝယျကလိရှာသားတဈဦးက ပွောသညျ။
ယငျးသို့ ဒဏျငှပေေးဆောငျရာ၌ နောကျနောငျတှငျ မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲခွငျး ကိစ်စရပျမြားမပွုလုပျ မကြူးလှနျတော့ပါ၊ ထပျမံ ကြူးလှနျမိပါက ထိုကျသငျ့သညျ့ပွဈဒဏျကို ပွတျသားစှာအရေးယူခံပါမညျဟု မိမိကို မိမိတာဝနျရှိလူကွီးမငျး၏ ရှမှေ့ောကျတှငျ ဝနျခံကတိပွု လကျမှတျရေးထိုးစသေညျဟု သိရသညျ။ “ ကနြျောတို့ ရှာသား ၁၀ ယောကျလောကျပါတယျလို့ သိရတယျ၊ နာမညျတော့ မသိရပါဘူး၊ သူတို့မိဘဆှမြေိုးတှေ တိတျတိတျလေးမသိမသာ သှားရှေးနကွေတယျ”ဟု အမညျမဖျောလိုသညျ့ ပငကြေးရှာသားတဈဦးက ပွောဆိုသျောလညျး မှနျသတငျးအဂေငျြစီအနဖွေငျ့ သီးခွားအတညျပွုနိုငျခွငျး မရှိပေ။
အဆိုပါ မူးယဈဆေးဝါးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ ဖမျးဆီးထားသူမြားအား အပွဈရှိသူမြားအား တရားဥပဒအေရရေးယူရေးနှငျ့ အပွဈမဲ့ပွညျသူမြားအား ပွနျလညျလှတျပေးရေး ကရငျပွညျနယျ လုံ/နယျဝနျကွီးမှတဈဆငျ့ JMC-S နှငျ့ KNU ဆကျဆံရေးရုံး မြားသို့ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျခဲ့ကွောငျး လူမှုကှနျယကျ Facebook စာမကျြနှာမြားတှငျ တှရှေိ့ရသညျ။ အထကျပါဖွဈစဉျကို အမညျမဖျောလိုသညျ့ ရှနေ့တေဈဦးက “ပွညျသူက အစိုးရ ၂ ခုနဲ့ ကွုံဆုံနရေပုံပါ၊ ၂ ဖကျအရေးယူတာခံနရေတယျ”ဟု သုံးသပျသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/05/10/%e1%80%9e%e1%80%b6%e1%80%96c%e1%80
လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခ မြားနှငျ့ဆကျစပျ၍ ပွီးခဲ့သညျ့ ဧပွီအတှငျး လူ ၇၁ ဦးသဆေုံးခဲ့ပွီး ၉၁ ဦးဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျး ပွညျတှငျး လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာသညျ့ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျး Burma Monitor က ဖျောပွ သညျ။ ထို့အပွငျ လူ့အခှငျ့အရေးနှငျ့ ဆကျစပျဖွဈစဉျ အကွိမျ ၃၀ ဖွဈ ပှားခဲ့ပွီး ဖမျးဆီးခံရသူ ၉၆ ဦးရှိပွီး ၃၃ ဦး ပွနျလှတျ မွောကျခဲ့ကွောငျး Burma Monitor ၏ ဧပွီအစီရငျ ခံစာက ဆိုသညျ။
ထိခိုကျသဆေုံးမူမြားကို ဖျောပွရာတှငျ လကျနကျကွီး ကညျြကရြောကျမှု အပါအဝငျ တိုကျပှဲ၊ မိုငျးပေါကျကှဲမှုနှငျ့ လူ့အခှငျ့ အရေးဆိုငျရာ ဆကျစပျဖွဈစဉျမြားကို ထညျ့သှငျးတှကျခကျြ ထားခွငျးဖွဈသညျ။ တပျမတျောနှငျ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့မြားကွား ဧပွီ ၁ ရကျမှ ၃၀ ရကျအထိ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ခငျြးပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျ၊ ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျးနှငျ့ စဈကိုငျးတိုငျး ဒသေကွီးရှိ မွို့နယျ ၁၇ ခုတှငျ တိုကျပှဲ ၃၄ ကွိမျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ ဟု Burna Monitor အစီရငျခံစာကဆိုသညျ။ ထို့အပွငျ မိုငျးပေါကျကှဲမှု ၁၀ ကွိမျဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး ဖျောပွသညျ။
တိုကျပှဲဖွဈပှားမှု အမြားဆုံး မှာ ရခိုငျပွညျနယျတှငျဖွဈပွီး စုစု ပေါငျး ၁၉ ကွိမျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ။ ယငျးတိုကျပှဲမြားနှငျ့ ဆကျစပျ၍ သဆေုံးသူ ၃၀ ဦးရှိပွီး ၆၆ ဦးဒဏျရာရရှိခဲ့သညျဟု ဆိုသညျ။ ထို့အပွငျ မွမွှေုပျမိုငျးပေါကျကှဲမှု လေးကွိမျဖွဈပှားခဲ့ပွီး နှဈဦး သဆေုံးကာ တဈဦးဒဏျရာရှိခဲ့ကွောငျး အစီရငျခံစာက ဖျောပွသညျ။ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝဒသေတှငျလညျး ဧပွီအတှငျး တိုကျပှဲရှဈကွိမျဖွဈပှားခဲ့ပွီး လကျနကျကွီးကညျြကရြောကျမှုကွောငျ့ အရပျသား ၁၆ ဦး သဆေုံးကာ ၁၆ ဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့ ကွောငျး အစီရငျခံစာက ဆိုသညျ။ ပလကျဝမွို့နယျတှငျ မွမွှေုပျမိုငျး ပေါကျကှဲမှု တဈကွိမျဖွဈပှားခဲ့ပွီး တဈဦးဒဏျရာရရှိခဲ့ ကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးတှငျ တိုကျပှဲလေးကွိမျဖွဈပှားပွီး ငါးဦးသဆေုံးခဲ့ကာ မိုငျးပေါကျကှဲမှု တဈကွိမျဖွဈပှားခဲ့သညျ။ ကရငျပွညျနယျတှငျ တိုကျပှဲတဈကွိမျနှငျ့ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးတှငျ တိုကျပှဲနှဈကွိမျ ဖွဈပှားခဲ့ သညျဟုလညျး အစီရငျခံစာက ဖျောပွထားသညျ။ https://7day.news/detail?id=185811
ကယားပွညျနယျအတှငျး အဝငျ၊ အထှကျပွုလုပျမညျ့ သူမြားသညျ သကျဆိုငျရာရပျကှကျမှ ခရီးသှားထောကျခံခကျြ ပွသရ မညျဟု ကယားပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့က ယမနျနတှေ့ငျ ထုတျပွနျသညျ။
COVID-19 ရောဂါ ကူး စကျပွနျ့ပှားမှုမရှိစရေေးကွိုတငျကာကှယျသညျ့အနဖွေငျ့ ကယားပွညျနယျ၏ မွို့နယျ အဝငျ၊ အထှကျ ဂိတျမြားတှငျ ကနျြးမာရေးစဈဆေးခွငျး၊ ခရီးသှားထောကျခံခကျြမြား စဈဆေးခွငျးမြားကို ပွုလုပျနပွေီး ပွညျနယျတှငျးသို့ လာရောကျသူမြားဖွဈစေ၊ ပွညျနယျတှငျးမှ ပွငျပသို့သှားရောကျသူမြားဖွဈစေ သကျဆိုငျရာ ရပျကှကျ၊ ကြေးရှာအုပျစု အုပျခြုပျ ရေးမှူးရုံးမြားမှ တဈပတျအတှငျး ထုတျပေးထားသညျ့ ခရီးသှား ထောကျခံခကျြမြားကို ယူဆောငျ လာရမညျဖွဈသညျ။
ယငျးကဲ့သို့ ဆောငျရှကျရခွငျးသညျ ရောဂါပိုးရှိသူမြားနှငျ့ ထိတှခေဲ့သူမြားအား အခြိနျနှငျ့တဈပွေးညီ ဆကျစပျဖျောထုတျ နိုငျရေး အတှကျဖွဈပွီး ထောကျခံခကျြမပါရှိပါက ထောကျခံခကျြ ပွနျယူခိုငျးခွငျး၊ အရေးယူခွငျး၊ ပွညျနယျအတှငျး ဝငျရောကျခှငျ့ ပွုမညျမဟုတျကွောငျး ကယား ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဝငျ သဘာဝ သယံဇာတနှငျ့ သဈတောဝနျကွီး ဦးတီရယျက ပွောသညျ။ ‘‘ထောကျခံခကျြပါရငျ စဈဆေးရတာ လှယျမယျ၊ မွနျမယျလေ။ ဘာလို့ဆို တခြို့က အမှနျမဖွပေဲ စဈဆေးသူတှကေို ရဈတာ၊ ရနျတှတေ့ာမြိုးရှိတယျ။ အဓိက ရညျရှယျခကျြက လိမျပွီးသှားတာမြိုးမဖွဈဖို့ပါ။ ထောကျခံခကျြ မပါရငျ ပေးမဝငျတာမြိုးတော့ မဟုတျဘူး ’’ ဟု ၎င်းငျးကပွောသညျ။ https://7day.news/detail?id=185757
ရာသီဥတု အလှနျပူပွငျးသောကွောငျ့ မျောလမွိုငျမွို့ကို အဓိကရဝေပေေးနရေသညျ့ ရှနေတျတောငျဆညျ ရခေမျးခွောကျမှုရှိ လာပွီး နှဈပတျစာခနျ့သာ အဆငျပွတေော့မညျဟု မျောလမွိုငျစညျပငျသာယာရေးအဖှဲ့ တှဲဖကျညှနျကွားရေးမှူး ဦးတငျကိုကိုက ပွောသညျ။ “ပူပွငျးတော့ ရှနေတျတျောဆညျရကေို တဈရကျကို ဂါလံသိနျး ၄၀ လောကျ ထုတျနတေယျ၊ အတ်တရံက တဈရကျ ကို ဂါလံ ၁၅ သိနျးလောကျ ထုတျနရေတယျ၊ ပွသနာဖွဈနတောက ရှနေတျတောငျကနေ ထုတျတဲ့ ရကေ ကြှနျတျောတို့ ခနျ့မှနျးတာဆိုလိုရှိရငျ နောကျထပျ ၂ ပတျစာလောကျကိုပဲ ရယေူလို့ အဆငျပွတေော့မယျ့ အနအေထားမြိုးတှရေ့တယျ”ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
ထို့အတူ မှနျပွညျနယျရရှေားမှုအန်တရာယျနှငျ့ ပတျသကျပွီး သဘာဝဘေးအန်တရာယျ ရနျပုံငှေ ၁ ဘီလီလြံမှ အသုံးပွု၍ ဖွရှေငျး ပေးနသေညျဟု မှနျပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာအေးဇံက ပွီးခဲ့သညျ့မတျလလယျတှငျ သတငျးထောကျမြားကို ပွောသညျ။ သို့ရာတှငျ ပွညျနယျတှငျးရရှေားပါးမှု ၇၅ %ကို ပွညျနယျအစိုးရဖွရှေငျးပေးနိုငျထားပွီးဟု ဆိုသျောလညျး မွို့နယျတိုငျးတှငျ ကြေးရှာမြားပါမကနျြ မီးသတျတပျဖှဲ့၊ လူမှုရေးအသငျးမြားနှငျ့ ပရဟိတအသငျးအဖှဲ့မြားက နစေ့ဉျရအေလှူဝပေေးနရေကွောငျး လူမှုကှနျယကျမြားမှတဆငျ့ တှရှေိ့ရသညျ။
အထူးသဖွငျ့ ခြောငျးဆုံနှငျ့ ပေါငျမွို့နယျဘကျမှာ အဓိက ရရှေားပါးမှုမြား ဖွဈပျေါနသေညျဟု မျောလမွိုငျ လူမှုကယျဆယျရေး အဖှဲ့မှ ကိုဇငျမိုးက ပွောသညျ။ အကယျ၍ သောကျသုံးရပွေတျလပျပွီး ရအေခကျအခဲဖွဈပျေါလာပါက ကြေးလကျဒသေ ဖှံ့ဖွိုး ရေးဦးဌာနသို့ အကူအညီတောငျးခံနိုငျသလို သောကျသုံးရမြေား ဖွနျ့ဝပေေးနိုငျရေး စီစဉျထားကွောငျး ပွညျနယျ ကြေးလကျ ဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/05/08/%e1%80%9b%e1%80 %b1%e1%8 0%81%e1%80%99%e1%80
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့ ကိုဗဈ-၁၉ လူနာ သညျ ဓာတျခှဲခနျး အဖွနှေဈကွိမျ Negative ဖွဈသဖွငျ့ ဆေးရုံ ပေးဆငျး လိုကျပွီ ဖွဈကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ဧပွီ ၂၄ ရကျတှငျ မူဆယျမွို့ အသကျ ၈၇ နှဈရှိ အမြိုးသမီး တဦးသညျ ကိုဗဈ ၁၉ အတညျပွုလူနာအဖွဈ ကနျြးမာရေး နှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနက ကွညောခကျြ ထုတျခဲ့သညျ့ သူဖွဈသညျ။ ထိုဧပွီ ၂၄ ရကျနောကျပိုငျး အသကျ ၈၇ နှဈအရှယျ ကိုဗဈ-၁၉ လူနာ ၏ ဓာတျခှဲနမူနာကို ထပျမံစဈဆေးရာ Negative ၂ ကွိမျဖွဈသဖွငျ့ ဆေးရုံ မှ ဆငျးခှငျ့ ပေးလိုကျကွောငျး မူဆယျမွို့ဆေးရုံအုပျ ဒေါကျတာ ဟနျနိုငျစိုး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ပွောသညျ။
ဆေးရုံ ပေးဆငျးပွီးနောကျ ဟိုတယျ Quarantine ၇ ရကျ နှငျ့ နအေိမျ Quarantine ၇ ရကျ စုစုပေါငျး ၁၄ ရကျနပွေီးပါက ထပျမံစဈဆေးပွီးမှ အပွငျသှား လာခှငျ့ပွုမညျဟုလညျး ဒေါကျတာ ဟနျနိုငျစိုး ကပွောသညျ။ “ အဖှား က Negative နှဈကွိမျဖွဈပွီး နကေောငျးတာကွားရတော့ ဝမျးသာပါတယျ။ အသကျကလညျး ကွီးပွီးဆိုတော့ စိတျတော့ပူတယျ။ မဟုတျရငျ အားလုံးက ဒီရောဂါကို စိုးရိမျနကွေတာ” ဟု မူဆယျဒသေခံ အမြိုးသမီး တဦးက ပွောသညျ။
မွနျမာ-တရုတျ နယျစပျ မူဆယျမွို့တှငျ ကိုဗဈ-၁၉ လူနာ တဦး ကို ဧပွီ ၂၄ ရကျ တှငျ ကနျြးမာရေး နှငျ့ အားကစား ဝနျကွီးဌာန က ထုတျပွနျကွညောပွီးနောကျပိုငျး တရုတျနိုငျငံတှငျ တငျးကွပျသညျ့ စညျးကမျးမြားထုတျပွနျကာ တပိုငျတနိုငျ ခွံထှကျ သီးနှံ မြား တရုတျနယျစပျသို့ ဖွတျသနျးရောငျးခခြှငျ့မရတော့သညျ့ အခွအေနဖွေဈခဲ့သညျ။ https://burmese.shannews.org/ archives/16466
ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး ကြေးသီးမွို့နယျတှငျ ကပျြသိနျး ၂,၆၀ဝ ကြျောတနျဖိုးရှိ ထိနျးခြုပျဓာတုပစ်စညျးမြား သယျဆောငျ လာ သညျ့ မျောတျောယာဉျအား ရဲတပျဖှဲ့က ဖမျးဆီးခဲ့သညျ။ မလေ ၇ ရကျ နံနကျက လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ကြေးသီးမွို့နယျ မိုငျးနောငျမွို့အဝငျတှငျ နယျမွလေုံခွုံရေး ဆောငျရှကျနစေဉျ ဝမျဆငျးဘကျမှ မိုငျးနောငျသို့ မောငျးနှငျလာသညျ့ ကုနျတငျယာဉျ တဈစီးကို စဈဆေးရနျ ရပျတနျ့ခိုငျးရာ ၎င်းငျးယာဉျမှာ နောကျပွနျလှညျ့၍ မောငျးနှငျ ထှကျပွေးခဲ့ကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့က ထုတျပွနျ သညျ။
ရဲတပျဖှဲ့က လိုကျလံတားဆီးရာ ၎င်းငျးယာဉျပျေါ လိုကျပါလာသညျ့ ယာဉျမောငျးအပါအဝငျ အမြိုးသားနှဈဦးက ကုနျတငျ ယာဉျကို ရပျတနျ့ထားခဲ့ပွီးနောကျတှငျ ကပျလကျြလိုကျပါလာသညျ့ Vigo အမြိုးအစား ကိုယျပိုငျယာဉျ ပျေါတကျ၍ ဆကျလကျ မောငျးနှငျ ထှကျပွေးခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ ရဲတပျဖှဲ့က ဝိုငျးဝနျးပိတျဆို့ဖမျးဆီးခဲ့ရာ ကုနျတငျယာဉျမောငျး လှိုငျသာယာမွို့နယျနေ အသကျ(၂၈)နှဈအရှယျ ခဈြဝငျ့သူနှငျ့ ယာဉျအကူဖွဈသူ မူဆယျမွို့နေ (၂၆)နှဈအရှယျ လှိုငျဝဦေးတို့ နှဈဦးကိုလညျးကောငျး၊ ကိုယျပိုငျယာဉျပျေါမှ မူ ဆယျမွို့နေ အမြိုးသားနှဈဦးတို့ကို ဖမျးမိခဲ့သညျ။ ကုနျတငျယာဉျကို စဈဆေးရာ ယာဉျပျေါတှငျ ပလတျစတဈပီပါ၊ သံပီပါမြား ဖွငျ့ ထညျ့သှငျးသယျဆောငျလာသညျ့ ကပျြသိနျး ၂,၆၅၆ တနျဖိုးရှိ ထိနျးခြုပျ ဓာတုပစ်စညျး အီသိုငျးအကျစီတဈ အရညျမြားကို ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့က ထုတျပွနျသညျ။
‘‘ဒီဓာတုပစ်စညျးတှကေ မူးယဈဆေးဝါးခကျြလုပျရာမှာ အသုံးပွုတဲ့ ပစ်စညျး တှပေါ။ နောကျပွီး သူတို့လေးယောကျက ဒီပစ်စညျးတှကေို အကြိုးတူပူးပေါငျးပွီး သယျဆောငျလာတာကို စဈ ဆေးတှရှေိ့ရပါ တယျ’’ဟု ကြေး သီးမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှ ရဲအရာ ရှိတဈဦးက ပွောသညျ။ https://7day.news/detail?id=185743
ကခငျြပွညျနယျမှ တဈဦးတညျးသော COVID -19 လူနာ Case 144 မှာ စဈဆေးခကျြအရ Negative နှဈကွိမျပွသဖွငျ့ ဆေးရုံဆငျးကာ သီးခွား Quarantine ဖွငျ့ နထေိုငျနပွေီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ COVID-19 လူနာအမှတျ ၁၄၄ သညျ ဧပွီ ၄ ရကျခနျ့မှစတငျကာ ကိုယျလကျမြား ထိုငျးမှိုငျးခွငျး ကိုခံစားရကွောငျး ဧပွီ ၇ ရကျ၊ ၈ ရကျမြားတှငျ ပွငျပဆေးခနျးပွသခဲ့ ကွောငျး၊ အံသှားမြားနာသညျ့အခွအေနဖွေဈခဲ့ကွောငျး၊ အသကျရှူမဝသညျ့ အခွအေနကွေုံတှခေဲ့ကွောငျး၊ လူလညျး ထိုငျးမှိုငျးနကွေောငျး၊ အလုပျသမား ဆေးခနျးတှငျလညျး ပွသခဲ့ရကွောငျး၊ ရနျ ကုနျမှ ဧပွီ ၁၅ ရကျတှငျ လူမှုကူညီရေးကားဖွငျ့ မိုးညှငျးသို့ ထှကျခှာလာကွောငျး၊ ဧပွီ ၁၆ရကျ မိုးညှငျးမွို့သို့ရောကျရောကျခွငျး Quarantine ဝငျခဲ့ကွောငျး၊ ဧပွီ ၂၁ ရကျတှငျ ဓာတျခှဲနမူနာ ယူခဲ့ကွောငျး၊ မညျသညျ့နရောမှကူးသညျကို အစရှာမရကွောငျး၊ ရနျကုနျတှငျ အခနျးအတူ နမှေလှဲ၍ သီးခွား လုပျကိုငျရသညျ့အခွအေနဖွေဈကွောငျး၊ ပွညျပခရီးလုံးဝမရှိကွောငျး သိရသညျ။
လူနာအမှတျ ၁၄၄ က “ရောဂါမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ အရမျးပေါ့သှားတယျ။ ကြှနျတျော ခံစားရတာကတော့ ကိုယျလကျထိုငျးပွီး ဖြားခငျြတာ အရငျဖွဈတာ။ အသကျရှူမဝတာတှေ ဖွဈတယျ။ ဆေးရုံတကျပွီးနောကျမှ ထူးထူးခွားခွားဖွဈတာ ဘာမှမရှိဘူး။ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှကေလညျး ဘာမှမလိုအောငျကူညီ ပေးကွတယျ။ အားလုံး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ပိုးတှတေဲ့ လူနာတှေ ကိုလညျး ဘာမှအားမငယျစခေငျြဘူး။ အခြိနျတနျရငျ သူ့ဟာသူ ပြောကျသှားမှာပါ” ဟု ပွောကွားသညျ။
အသကျ ၂၄ နှဈ အရှယျရှိ မိုးညှငျးမွို့မှ COVID-19 လူနာမှာ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး လှိုငျသာယာမွို့နယျရှိ ဖိနပျစကျရုံတဈရုံတှငျ လှနျခဲ့သညျ့ မတျလနှောငျးပိုငျးက တရုတျစကားပွနျအဖွဈ လုပျကိုငျသူဖွဈကွောငျး၊ စကျရုံဝငျးအတှငျးရှိ အခနျး ၁၈ ခနျးပါ တိုကျ ခနျး အမှတျ ၁၆ တှငျ တရုတျလူမြိုးတဈဦးနှငျ့ အတူနထေိုငျခဲ့သညျ။
ကခငျြပွညျနယျ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဦးစီးဌာန စာရငျးမြားအရ ရနျကုနျမွို့သို့ ပေးပို့စဈဆေးခဲ့သညျ့ ဓာတျခှဲနမူနာပေါငျး ၅၃၈ ဦး တှငျ တဈဦးတှရှေိ့ရပွီး ဓာတျခှဲနမူနာ ၄၈၇ တှငျ မတှရှေိ့ရကွောငျး၊ ဓာတျခှဲအဖွစေောငျ့ ဆိုငျးနသေူ ၅၀ ရှိကွောငျး မေ ၁၀ ရကျ က ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ ကခငျြပွညျနယျတှငျ မေ ၁၀ ရကျအထိ ဆေးရုံ၊ နအေိမျ၊ လူမှုအဆောငျအအုံ ၅၃၆ခု တှငျ လူဦးရေ ၆၇၂၃ ဦးမှာ Quarantine ဝငျ နဆေဲဖွဈပွီး ၈၆၆၈ ဦး Quarantine လှနျမွောကျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/ 173087
မူဆယျမွို့ရှိ ပွညျတျောပွနျ လကျခံကွိုဆိုရေး စခနျးတှငျ တရုတျနိုငျငံမှ ပွနျလညျဝငျရောကျလာသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသား တဈထောငျကြျော သောငျတငျလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။ COVID-19 ရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျ ကုသရေးကျောမတီ၊ ကွိုဆို လကျခံရေးကျောမတီမှ ၎င်းငျးတို့စီစဉျပေးသော ကားမြားဖွငျ့ လားရှိုးသို့ ပို့ဆောငျပေးရာ အခြို့မှာ သုံးရကျခနျ့ သောငျတငျနမှေု မြား ရှိနသေောကွောငျ့ နထေိုငျစား‌သောကျ‌ရေးနှငျ့ သနျ့စငျခနျးမြား အတှကျပါ ဒုက်ခရောကျနကွေောငျး သိရသညျ။
မွနျမာ-တရုတျနယျစပျ မူဆယျမွို့နယျရှိ နနျးတျောဂိတျသို့ တရုတျနိုငျငံဘကျမှ ပွနျလညျဝငျရောကျလာသော မွနျမာနိုငျငံသာ မြားမှာ တဈရကျလြှငျ ၅၀ဝ ဦးခနျ့ရှိပွီး ၎င်းငျးတို့အား သကျဆိုငျရာက ကနျြးမာရေး စဈးဆေးပေးနပွေီး သံသယလူနာတှရှေိ့ပါက စောငျ့ကွညျ့လူနာအဖွဈ ကုသပေးနကွေောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါ နနျးတျောဂိတျမှ ပွနျလညျဝငျရောကျလာသော မွနျမာနိုငျငံ သားမြားမှာ ဧပွီ ၃ ရကျ မှ မေ ၁၁ အထိ တဈသောငျး ဝနျးကငျြခနျ့ ရှိနပွေီး မူဆယျမွို့နယျ COVID-19 ရောဂါ ကာကှယျထိနျး ခြုပျ ကုသရေးကျောမတီ၊ ကွိုဆိုလကျခံရေး ဆပျကျောမတီက စနဈတကြ လကျခံပွီး မွို့နယျပွညျသူ့ ကနျြးမာရေးဌာနက Fever Surveillance မြားပွုလုပျကာ ပွနျလညျဝငျရောကျ လာသူမြားအား ၎င်းငျးတို့အစီအစဉျဖွငျ့ နရေပျဒသေသို့ ပွနျနိုငျရနျစီစဉျ ပေးလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။
လကျရှိအခြိနျတှငျ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရ အစီအစဉျဖွငျ့ ပွညျတျောပွနျမြားအား ရထားဖွငျ့ ပို့ဆောငျရနျ စီစဉျထားသောကွောငျ့ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးရှိ နယျစပျဂိတျပေါကျမြားမှ ပွနျလညျဝငျရောကျ လာသူမြားအား လားရှိုးမွို့မှ အလှညျ့ကလြကျခံပွီး ရထားဖွငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ နရေပျဒသေအသီးသီးသို့ ဆကျလကျထှကျခှာစလေကျြရှိကွောငျးသိရသညျ။ https://news-eleven.co m/article/173103